Comic fact Marvel
Surtur ကိုသတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Beta Ray Bill
No Comments on Surtur ကိုသတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Beta Ray Bill
(comic fact) #skullmask
Surtur ကတော့ MCU မှာလည်းပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ Ragnarok ရဲ့ ထိပ်စီး , Asgard ကိုဖျက်စီးမဲ့ ကံတရားပါလာတဲ့ Fire Gaint ကြီးပေါ့။
သူက Demonic God တစ်ပါးပါပဲ။ သူအုပ်ချုပ်တဲ့ Relam က Ten Realm ထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Muspelheim ဆိုတဲ့ hell realm ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ ပထမဆုံး မီးဘီလူးကြီးပါ။
Asgard နှင့် Odin , Thor တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်သူတော်ကြီးဆိုလည်းမမှားပါဘူး။Odin Ten Relamကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်မှ Guardian of Universe ‌ဆိုတဲ့ God တွေက Relam တွေကြားကိုသူတို့ခွင့်ပြုချက်ပါမှသွားလို့ရအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Fire Realm ဆိုတာ အဆိုးရွားဆုံး realm တွေထဲကတစ်ခုပါပဲ။
Beta Ray Bill ဟာလည်း Fire Demon Godကြီး Surturနဲ့ ရန်ငြိုးရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Beta Ray Bill ရဲ့ ဂြိုလ်နဲ့ သူ့ရဲ့ မျိုးနွယ်တွေဟာ Surtur ကြောင့်ပျက်စီးသေကြေပျက်သုန်းခဲ့ရပါတယ်။
Thor နဲ့ Beta Ray Bill ရဲ့ The Great Battle အပြီးမှာ Thor ဟာ Beta Ray Bill ရဲ့ Strom breaker ကိုဖျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ Strom breakerဟာ Beta Ray Bill ရဲ့အရေးအပါဆုံးလက်နက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုThor စွမ်းအားတွေ ပေးသလို Form လည်းပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။Beta Ray Bill ဟာ Form တင်ရင် Horse Face နဲ့ badass ဖြစ်ပြီး သာမန်ပုံစံ humanoid form နဲ့လည်းနေလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Strom breakerမရှိတော့ သာမန်ပုံစံပြန်ပြောင်းမရပါဘူး။ဒီတော့ Lady Sif နဲ့ သူနဲ့ ချစ်ကြည်နူးမဲ့အချိန်မှာ Horse Face ကနေသာမာန်ပုံစံမပြောင်းတော့ဘူးလားဆိုတဲ့အပေါ်စိတ်ဒဏ်ရာရပြီး Beta Ray Bill ဟာ Asgard ကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ Odin နှင့်တွေ့ပြီးနောက်မှာသူ့ကို သာမန်ပုံစံပြန်ပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Odin ဟာလည်း War Of The Realm Comic event ကြီးပြီးတဲ့နောက်မှာ Odin Force နဲ့ All-Father Title ကို Thor ကိုပေးခဲ့တာကြောင့် သူ့အနေနှင့်ဘာအစွမ်းအစမှမရှိ‌သည်ဖြစ်၍ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Fire Realm မှာရှိတဲ့ Twilight Sword ( Surtur ရဲ့ဓား) ကတော့ သူ့ကို သာမန်ပုံစံပြန်ပြောင်းနိုင်ကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Beta Ray Bill ဟာ Fire Realm ကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး Odin ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Fire Relam ကိုဝင်မည့်လမ်းမှာ Guardian of the universe တွေနှင့်တွေ့ပြီး Beta Ray Bill ကို Odin စေလွှတ်သည်ဖြစ်လို့ Fire Realmကို ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာ Beta Ray Bill နှင့် Skurge, Pip the troll တို့ဟာ fire realm ကို beta Ray Bill ရဲ့ living ship ကြီ skuttlebuttနှင့်အတူဝင်ပြီး Twilight Swordကို ယူဖို့လုပ်ကြပါတော့တယ်။
Surtur နဲ့ Beta Ray Bill တို့ Battle ဟာအင်အားချင်းမမျှခဲ့ပါဘူး။ အကောင်အကြီးကြီးနဲ့ ပိစိလေး လက်သီးချင်းထိုးနေသလိုပါပဲ။အဲ့နောက်မှာ Beta Ray Bill ဟာ Surtur ကို ‌coward လို့ပြောပြီး fight likeamortal ဆိုပြီးစိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
Surtur ဟာလည်း human size ကိုပြောင်းပြီး Beta Ray Bill ကိုချပါတယ်။ human size form မှာ beta Ray Bill ကပိုသွက်နေတော့ Surturဟာ Gaint Size ပြန်ပြောင်းပြီးအနိုင်ကျင့်ပါတော့တယ်။
Skuttlebutt ဟာ living ship ဖြစ်တာကြောင့် ယာဉ်တစ်ခုလုံး အမြှောက်ပုံစံပြောင်းပြီး Skurgeက Surturကိုချိန်ပြီးပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။Power Blast ကပြင်းလွန်းတော့ Surtur ဟာ လဲကျသွားပါတယ်။
ထိုအချိန်မှာပဲ Beta Ray Bill ဟာ Twilight Swordကို ဆွဲနှုတ်ပြီး ဓားကိုအားကုန်လွှဲကာ လဲကျနေတဲ့ Surturခေါင်းကိုဖြတ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။
Beta Ray Bill အနိုင်ရပြီး Humanoid Form ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့တာပေါ့။
Beta Ray Bill ရဲ့ဘဝဟာကြမ်းတမ်းပါတယ်။Thor နဲ့ယှဉ်ရင်အမြဲဒုတိယဖြစ်နေခဲ့တာပါပဲ။odin ကသူ့ကို Thor power ပေးပေမဲ့လည်း ခဏတာအသုံးချခဲ့တာပါပဲ။ Thor ကလည်း သူ့ရဲ့ hammer ကိုဖျက်စီးပစ်တယ်။ အကြာကြီး သူ့မှ နဂိုပုံစံမပြောင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အခုမှပဲ သာမန်ပုံစံလေးရရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Humanoid Formပြောင်းပြီးတာတောင် မြင်းမျက်နှာကိုသူမှန်ရဲ့တစ်ခြမ်းမှာပြန်မြင်ရတုန်းပါ။ သူ့ရဲ့မြင်းနဲ့တူတဲ့မျက်နှာကိုလည်း သဘောမကျခဲ့ပါဘူး။
အခုလက်ရှိတော့ Surtur ကို Beta Ray Bill ကသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Fire God ကြီးကတော့ထုံးစံအတိုင်းပြန်ရှင်မလား twilight sword ကြောင့်လုံးဝပျောက်ကွယ်ပြီလားဆိုတာတော့အနာဂတ်မှာသိလာပါလိမ့်မယ်။
(Beta Ray Bill#5) 2021
No Comments on လက်ရှိ Marvel comic တွေထဲမှ မြင်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာများ
လက်ရှိ Marvel comic အသစ်များထဲမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာများ, ထူးခြားတဲ့ဇာတ်လမ်းများနဲ့အတူ လူသိနည်းတဲ့factအချို့ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.
Celestialတည်ဆောက်နေတဲ့ Tony Stark
ကမ္ဘာပေါ်ကGeniusအဖြစ်ဆုံးစာရင်းထဲမှာပါဝင်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး.MCUမှာဆိုရင်လည်း Nano techတို့ Hulk Busterတို့ထိမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်.Comicထဲမှာတော့ comicဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ LAထက်ကိုပိုမိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နဲ့ မထင်မှတ်ထားလောက်တဲ့အရာတွေထိကိုရှိခဲ့ပါတယ်.New Asgardကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရာမှာလည်း Advance cityကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင် အရာရာဦးဆောင်ပြီး techတွေဖြည့်ကာတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ်.Helios Laser – UV Drone ဆိုပြီးတော့ Hulkကိုအရိုးပဲကျန်တော့ထိဖြစ်စေတဲ့လက်နက်မျိုးတွေကိုတီထွင်ခဲ့ပါသေးတယ်.အခုပြောပြသွားမဲ့အရာက ဒီအရာတွေထက်ကိုပိုမိုသာလွန်တယ်.လက်ရှိထွက်နေတဲ့ Hulk 2021 comicမှာစတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်. Celestail Armorကြီးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်. ဒါပေမဲ့ ဒီCelestial Armorမှာ အရာရာအားလုံးကသူ့ဖန်တီးမှုတွေကြီးပဲတော့မဟုတ်ပါဘူး.အသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားပါမယ်.
ဖြစ်ပုံကတော့ Knullဆိုတဲ့ Symbiote Godကြီးက Symbioteစစ်တပ်ကြီးနဲ့အတူ ကမ္ဘာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့universeထဲမှဆင်းချလာပါတယ်.Knullရဲ့ symbioteစစ်တပ်တွေထဲမှာ Celestialတွေပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်.KnullကCelestialတွေကိုပါ symbioteတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.ဒီbattleမှာတော့Earth Mightiest Heroesတွေ Avengersတွေက Knullကိုနှိမ်နင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီး battleကိုအဆုံးသတ်ကာအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်.Knullရဲ့symbioteတွေရှင်းသွားတဲ့အခါ battleအတွင်းမှာပါဝင်လာခဲ့တဲ့ Celestialရဲ့bodyကို Tony Starkကရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်.
ထိုမှနေပဲ ဒီCelestial bodyကိုဖြည့်စွက်မွမ်းမံပြီး Iron Manကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ပုံစံအဖြစ် ပြောင်းလဲတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်.သူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Celestial Bodyရဲ့ရင်ဘက်က လက်ကျန်energy coreကို pocket dimensionအဖြစ်ပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်ပါတယ်.ကမ္ဘာပေါ်မှာအရမ်းအထိအခိုက်အပျက်အစီးများနိုင်မဲ့battleမျိုးတွေမှာ ပြည်သူပြည်သားတွေအရပ်သားတွေထိခိုက်မှုမရှိလေအောင် Celestial bodyရဲ့energy coreထဲက pocket dimensionထဲမှာ လုံခြုံစွာခိုလှုံခွင့်ရနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.Celestial Armorကိုတော့သူcontrolလုပ်ပြီး ရန်သူတွေကို အေးဆေးဝိုက်မယ်ပေါ့ဗျာ.
Hulk 2021 issue 1မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပုံအရ Celestial Armorကတည်ဆောက်မှုပြီးစီးခါနီးနေပါပြီ.ဒါပေမဲ့ အနှောက်အယှက်အဟန့်အတားတွေလည်းရှိနေခဲ့တယ်. Bruce Bannerက Celestial power coreကိုလိုချင်တဲ့အတွက် Iron Manကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်.ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ အတိအကျမသိရသေးပါဘူး issueအသစ်ထွက်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေရသေးလို့ပါ.
Iron Manတစ်ယောက် comicထဲမှာ pocket dimensionပါဝင်မဲ့ Celestial Armorတည်ဆောက်နေပြီပေါ့ဗျာ. အခုမှfirst timeလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ.အဲ့မတိုင်ခင် Giant Size Busterတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်အစအဆုံးတီထွင်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်. Godkiller Armor MK IIလို့အမည်ရပါတယ်.Dark Celestial(Aspirants)တွေကိုယှဥ်ချဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း ကိုယ်ပိုင်technologyတွေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်နေပေမဲ့လည်း Dark Celestialတွေကိုမယှဥ်နိုင်ခဲ့ပဲ battleမှာနယ်နယ်ရရဘာမှကိုမလုပ်လိုက်နိုင်ပဲ Godkiller Armor MK IIကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်.တစ်ဖက်ကရန်သူတွေက Dark Celestialတွေဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်. Tonyကလက်မလျှော့သေးဘူးပေါ့ဗျာ အခုပိုမိုကောင်းမွန်မဲ့ Celestial Armorကိုတည်ဆောက်နေပါပြီ.
ဒီနေရာမှာတစ်ချို့အမှတ်မှားနေတဲ့အချက်အချို့ကိုလည်းထည့်ပေါင်းပြောပြပေးသွားပါမယ်. Godkiller Armor MK IIကို တီထွင်ဖို့အစပျိုးခဲ့မှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေပါတယ်. Godkiller Armor MK IIဟာ တစ်ကယ့်Godkiller Armorကြီးကိုတုပပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. မူရင်း Godkiller Armorဟာ Dark Celestialတွေရဲ့ဖန်တီးမှုဖြစ်ပါတယ်. Universeကြီးအစ Celestialတွေနဲ့ Dark Celestialတွေbattleကြားမှာ Celestialတွေကိုဝိုက်ဖို့အတွက် Dark Celestialတွေကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.အဲ့ မူရင်း Godkiller Armorကိုလည်းTonyပိုင်တယ်ထင်ပြီး အမှတ်မှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်.
Tonyက Dark Celestialတွေရဲ့ဖန်တီးမှု Godkiller Armorကိုရှာတွေ့ခဲ့တာပါ.TonyကGodkiller Armorကို နိုးထစေခဲ့ပြီး ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး.Auto pilot systemကြောင့် ဂြိုလ်နှစ်ခုဟာလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီး သက်ရှိများစွာသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်.Godkiller Armorကို Dark Celestialတွေကလွဲလို့ ဘယ်သူမှaccessမလုပ်နိုင်တာကြောင့်လက်လျှော့ခဲ့ရပါတယ်.ဒီကနေမှပဲ Tonyက ideaတစ်ခုရပြီး Giant size enemyတွေကိုယှဥ်ချဖို့ Godkiller Armorကိုမှီငြမ်းပြီး Godkiller Armor MK IIဆိုပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာပါ.
ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လောက်မှတောင်အသုံးမပြုလိုက်ရပါဘူး.Battleအတွင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်.အခုလက်ရှိမှာတော့ Celestial Armorသစ်တစ်ခုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နေပါပြီ. Godkiller Armor MK IIရဲ့Originကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ. Godkiller Armorနဲ့ Godkiller Armor MK IIတို့ကို ပုံမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်
Phoenix hostဖြစ်လာတဲ့ Echo Phoenix forceလို့ပြောလိုက်ရင် Jean Greyကိုတန်းမြင်ကြမှာပါ.X-Men movieတွေထဲမှာလည်း Phoenix forceကိုအသုံးပြုပြခဲ့တဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းအချို့လည်းမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ. Phoenix forceဟာ comicထဲမှာတော့ ဒီထက်ပိုပြီး ရှုပ်ထွေးနက်နဲပါတယ်.Avengersတွေရှိနေတဲ့ Earth 616မတိုင်မီ (Big Bangကြောင့်လက်ရှိuniverseကြီးဖြစ်မလာခင် အရင်Universe)မှာကထဲကရှိနေခဲ့တာပါ.နောက်ပြီး Phoenix forceဟာ သက်ရှိbeingတစ်ယောက်လည်းဖြစ်နေပါတယ်.Venomလိုမျိုးပဲ သက်ရှိတွေကိုPhoenix forceပေးပြီးhostပြုလုပ်ပါတယ်.
Jean Greyဟာလည်း hostဖြစ်ခဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါပဲ.Phoenix forceကိုထာဝရပိုင်ဆိုင်သူတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး. ကမ္ဘာပေါ်ကပထမဦးဆုံးPhoenix forceကိုလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ hostဟာ Lady Phoenixလို့အမည်ရပြီး 100000 BC မှAvengersတစ်ယောက်လည်းဖြစ်နေပါတယ်.အရင်universeမှာလည်းPhoenix hostရှိနေနိုင်တာမို့ Lady Phoenixဟာလည်း ပထမဆုံးhostမဟုတ်လေဘူး.ဒါကြောင့်ပဲ Phoenix forceဟာ comicထဲမှာရှုပ်ထွေးနက်နဲမှုတွေရှိနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်.Jean Greyပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ.Phoenix forceစုပ်ယူခံရခိုးခံရတာတွေကော Phoenix hostဖြစ်ခဲ့သူတွေကောအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်.
လက်ရှိမှာတော့ Phoenix forceကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ hostဟာ Maya Lopez (Echo)ဖြစ်ပါတယ်. Echoကို Hawkeye seriesမှာလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးပြီမို့ အားလုံးလည်းရင်းနှီးပြီးကျလောက်ပါပြီ. Echoက Phoenix hostဘယ်လိုဖြစ်လာရတာလဲ? ပထမပြောခဲ့သလိုပဲ Phoenix forceဟာ Jean Greyပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ.ဒါပေမဲ့ လက်ခံရရှိထားခဲ့တဲ့hostပေါ့ဗျာ.Jean Greyဟာ Phoenix forceကိုကိုင်ဆောင်ထားရတာအရမ်းကိုပင်ပန်းလာတဲ့အတွက် Phoenix forceကိုဆက်လက်မကိုင်ဆောင်ချင်တော့ပဲ သူမကိုreleaseလုပ်ပေးဖို့ Phoenix beingကြီးကိုကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုခဲ့တာပါ.ဒီကနေမှပဲ PhoenixဟာJean Greyထံကနေထွက်လာခဲ့ပြီးhostအသစ်တစ်ယောက်ကိုရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်. Moon KnightဟာPhoenix hostဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်.
Moon Knightဟာလည်းပဲ သူနဲ့ဆိုရင်ဒီအစွမ်းအစတွေဟာအရမ်းအန္တရာယ်ကြီးပြီး ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနိုင်တာကြောင့် Phoenix forceကိုပြန်လည်စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်.Phoenix beingကြီးကတော့ နောက်ထပ် host ကိုရှာရပြီး အလုပ်ရှုပ်ရတာပေါ့ဗျာ. ဒီတစ်ခါတော့ တစ်ယောက်ထဲကိုphoenix forceပေးတာမဟုတ်ပဲ heroပေါင်းစုံ villainပေါင်းစုံကိုတစ်ပြိုင်နက် အစွမ်းတွေ မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်.ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Phoenix forceနဲ့အမှန်တစ်ကယ်ထိုက်တန်သူကိုရှာတွေ့ချင်တာပါ.ဒါကြောင့်ဒီအစွမ်းတွေရခဲ့ရင်သူတို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲစောင့်ကြည့်ရင်း Phoenix forceရလိုက်ကြသူအချင်းချင်းကိုလည်းချခိုင်းပါတယ်.
Phoenix forceရလိုက်ကြသူတွေကတော့ Captain America, Doctor Doom, Black Panther, Namor, Moon Girl, Man Thing, Maya Lopez, She Hulk, Red Widow, Shang Chi, Jane Foster, Hyperion, Logan, Black Knight, Howard the Duck, American Eagle, Shanna, … စသည်ဖြင့် Phoenix forceကိုရလိုက်ကြသူတွေ အများအပြားပါပဲ. Phoenix forceရလိုက်သူတွေ သူတို့ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းpermanent hostတွေဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားလာကြပြီး forceရသူအချင်းချင်း1by1တွေချကြပါတော့တယ်.
Phoenix forceကိုအသည်းအသန်လိုချင်ကြတဲ့လောဘတွေနဲ့အတူ ယှဥ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကြောင့် အပျက်အစီးအဆုံးအရှုံးတွေအတော်ကြီးမားခဲ့ပါတယ်.ထိုbattleတွေကြားထဲမှာမှပဲ Namorကြောင့် Echoတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်.Echoဟာဒီအရာတွေကြားမှာဝင်ရောက်ပါချင်သူတစ်ယောက်မဟုတ်သလို အစွမ်းအစတွေလိုချင်တပ်မက်မှုမရှိတာကြောင့်ပဲ Phoenix beingကြီးဟာ တစ်ခြားသူတွေစီက Phoenix forceတွေအကုန်ပြန်လည်စုပ်ယူပြီး Maya Lopez (Echo)ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းကာ အစွမ်းအစတွေအကုန်ပေးပြီး Phoenix hostဖြစ်လာစေပါတော့တယ်.
Echoဟာလည်းပဲ Phoenix hostအဖြစ်ဆက်ခံပြီး forceရဖို့အချင်းချင်းချနေတဲ့heroတွေရဲ့battleတွေကိုလည်းရပ်တန့်ပေးခဲ့ပါတယ်. Phoenix hostဖြစ်နေတဲ့Echoအကြောင်းကဒီလောက်ပါပဲ. Echoအတွက် Phoenix songဆိုတဲ့comic seriesတစ်ခုကလည်းongoingအဖြစ်runလျက်ရှိပါတယ်.လက်ရှိeventတွေအတွက်အရေးပါတဲ့characterတစ်ယောက်အဖြစ်ရှိနေပါတယ်.
Sorcerer Supremeဖြစ်လာတဲ့ Bruce Bunner
ဒီversionကတော့Marvel comicရဲ့main earth 616က Bruce Bannerတော့မဟုတ်ပါဘူး.What ifလိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲ Another possibilityနဲ့ Multiverseက Bruce Bannerဖြစ်ပါတယ်.
Bruceဟာ သူ့စိတ်သူမထိန်းနိုင်သလို Hulkဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေသာရှိစေတဲ့အတွက် ဒီအခြေအနေတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်မဲ့အဖြေတွေကိုရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်.တစ်နေ့မှာတော့ Doctor Strangeနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်. Doctor Strangeရဲ့magicအစွမ်းတွေနဲ့သူ့ကိုကူညီနိုင်မယ်ထင်မိတဲ့အတွက် Doctor Strangeကိုအကူအညီတောင်းရင်းနဲ့ပဲ ပညာတော်သင်တစ်ယောက်ပါဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်. Meditationအတူပြုလုပ်ကြရင်းနဲ့ပဲ Bruceဟာသူ့စိတ်ကိုထိန်းလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်.Magic spellပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးလည်း အတော်ကိုတတ်ကျွမ်းလာခဲ့ပါတယ်.
အခြေအနေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောက်ပြီး ပညာတွေပြည့်စုံလာတဲ့အခါ Bruceဟာ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ Hulkကိုခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်.ဒါတင်မကသေးပဲ Hulkကို ငရဲပြည်ထိပို့လွှတ်ပြီးအပြစ်တွေခံယူစေပါတော့တယ်. Bruceနဲ့Hulkဟာ ခန္ဓာတစ်ခုထဲဆိုပေမဲ့လည်း Avengers End Gameမှာ မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်း Smart Hulkကိုယ်ထဲက Bruceကိုခွဲထုတ်လိုက်သလို ဒီComicထဲမှာတော့ Bruceကိုယ်ထဲကနေHulkကိုခွဲထုတ်ခဲ့တာပါ.Hulkအဖြစ်လုံးဝမပြောင်းလဲတော့တဲ့ Sorcererတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်.
အချိန်တစ်ခုကြာပြီးနောက် Doctor Strangeက တစ်ခြားrealityတွေ planeတွေကိုလေ့လာဖို့ရှိတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့bodyကြီးကိုထားခဲ့ပြီး Astral formနဲ့ journeyလုပ်ဖို့ရှိလာခဲ့ပါတယ်.ဒါကြောင့်ပဲ Doctor Strangeက သူ့ရဲ့mantleကို Bruceကိုလွှဲပေးခဲ့ပြီး Bruce Bannerတစ်ယောက် Sorcerer Supremeတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တော့တာပါပဲ.Doctor Strangeလောက်မကြမ်းပေမဲ့လည်း သူ့အနေအထားနဲ့သူ နီးစပ်သူမို့ Sorcerer Supremeဘွဲ့နဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်.
Sorcerer Supremeဖြစ်လာတဲ့Bruceအကြောင်းကတော့ ဒီလောက်ပါပဲဗျ. ဒါပေမဲ့ပြောလက်စနဲ့ပဲ ဒါဆိုHulkကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုပါ ထည့်ပေါင်းပြောသွားပါမယ်. Hulkကတော့ Mephistoရဲ့ငရဲပြည်ကိုရောက်သွားပြီး ငရဲသားတွေရဲ့ဒဏ်ပေးမှုကိုခံနေခဲ့ရပါတယ်.Hulkကလည်းမခေသူမို့လို့ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရင်း Hell demonတွေကိုသတ်ဖြတ်စားသောက် ပါဝါတွေရလာပြီး Infernal Hulkဆိုတဲ့ Evil Monsterကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်. Bruceကသူ့ခန္ဓာနဲ့ပြန်မပေါင်းမစည်းမချင်း ငရဲပြည်မှာပဲပိတ်မိနေမှာဖြစ်ပါတယ်
Ghost Riderဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Peter Parker!
ဒီPeterကလည်း 616ကမဟုတ်ပဲ တစ်ခြားearthကပါ.အရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ Sorcerer Supreme Bruceရှိနေတဲ့universeနဲ့အတူတူပါပဲ.ဆိုတော့ အဲ့universeကအဆန်းတွေကြီးပဲပေါ့ဗျာ.
ဒီuniverseမှာလည်း Peterက Spider-Manအရင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.ဒါပေမဲ့ တစ်ခြားSpideyတွေနဲ့မတူတာကတော့ သူ့ရဲ့Uncle Benကမသေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင် ပြည့်စုံတဲ့Heroတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် အကြံဉာဏ်တွေပေး trainပေးခဲ့ရင်း အတူယှဥ်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲ.Amazing Spiderဆိုတဲ့အမည်တွင်လာခဲ့ပါတယ်.Iqမြင့်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီ Parker Technologyဆိုတဲ့ companyတစ်ခုကိုပါတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်. Multiverseတွေခုန်ကူးနိုင်တဲ့ transportation deviceကိုပါထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိပါပဲ.
ဒါပေမဲ့Uncle Benနဲ့ Amazing Spiderတို့ဟာ တွေးခေါ်ကြံဆမှုတွေမှားခဲ့ကြပြီး လမ်းလွဲတစ်ခုပေါ်လျှောက်လှမ်းရင်း မကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်.ဒါကတော့ transportation deviceကိုသုံးပြီး Multiverseက Spider-Manတွေကိုရှာဖွေကြတာဖြစ်ပါတယ်.ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အဲ့Spider-Manတွေကိုဖမ်းစီးပြီး Spideyပါဝါတွေကိုစုပ်ယူပြီး Amazing Spiderစီလွှဲပြောင်းပြီး ပါဝါတွေတိုးမြှင့်လာစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်.
ဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့် Amazing Spiderကပိုstrongဖြစ်လာပြီး သူတို့universeကိုပိုမိုထိရောက်စွာနဲ့ တိုက်ခိုက်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မယ်ထင်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်. Uncle Benနဲ့ Amazing Spiderတို့ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်သတိမထားမိပဲ Evilဆန်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်.MultiverseကSpider-Manတွေတော်တော်များများကိုအယုံသွင်းပြီးဖမ်းစီးနိုင်ခဲ့သလို powerတွေကိုလည်းDeviceတစ်ခုထဲမှာစုပေါင်းထားခဲ့ပါတယ်.
ဒါပေမဲ့သူတို့ရည်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး.ဖမ်းစီးပြီးစုပ်ယူထားသမျှenergyတွေpowerတွေကို Amazing Spiderစီလွှဲပြောင်းဖို့လုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါ ချို့ယွင်းချက်တွေရှိနေခဲ့ပြီး ဒဏ်မခံနိုင်ခဲ့တာကြောင့် Amazing Spiderတစ်ယောက် သေခါနီးစဲစဲဖြစ်ခဲ့ပြီး comaဝင်သွားခဲ့ပါတယ်.ဒီအခြေအနေမှာပဲ သူလုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေကြောင့် မျောလွင့်နေချိန်သူ့soulက Mephistoရဲ့ငရဲကိုရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်.Amazing Spiderတစ်ယောက် တော်တော်ကြီးကိုအပြစ်ဒဏ်တွေခံခဲ့ရပါတယ်.Bodyကြီးကလည်းcomaအခြေအနေနဲ့အချိန်တစ်ခုထိကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်.
ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားကမှပဲ သူ့ကိုကယ်တင်ဖို့ လူတစ်ယောက်ကငရဲထိလိုက်လာခဲ့ပါတယ်.Yes သူကတော့ Sorcerer Supreme Bruce Banner ပဲဖြစ်ပါတယ်.မင်းအသက်ပြန်လည်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ဖို့ second chanceပေးမယ်ပေါ့. Amazing Spiderကလည်း ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ လာကယ်တာပဲအတော်ကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့.ငရဲပြည်ရောက်နေတာမို့ Amazing Spider Peter Parkerရဲ့soulကို Mesphitoကပိုင်ဆိုင်နေချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်.ဒါကြောင့် Amazing Spider, Sorcerer Supreme, Mephistoတို့သုံးယောက်သားဆွေးနွေးခဲ့ရပါတယ်.ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပဲရှိခဲ့ပါတယ်.
Mesphistoရဲ့အစေခံ Ghost Riderအဖြစ်ပြောင်းလဲခံရဖို့ပါ. Peterလည်းရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အဆုံး Deal with the devil လုပ်ရင်း Ghost Riderဖြစ်သွားတော့ပါတယ်. သူ့ရဲ့ idကိုတော့ Ghost Spiderဆိုပြီးပြောင်းလဲမှည့်တွင်ခဲ့ပါတယ်. Ghost Spiderဟာ သာမာန်Ghost Riderတွေထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ Angel Riderဖြစ်ပါတယ်.
Ghost Spiderကို Spider-Men Across The Spider-Verseမှာမြင်တွေ့ရဖို့အလားအလာရှိပါတယ်.teaserတွေအရlogoကိုပြသတဲ့sceneမှာGhost Spiderကိုကိုယ်စားပြုတယ်လို့ထင်ရတဲ့momentတစ်ခုပါဝင်ခဲ့လို့ပါဗျ
Ghost Spiderအကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျ.အချက်အလက်အပိုအဖြစ် Ghost Spiderဆိုပြီးနာမည်တူတွေရှိနေကြောင်းလည်းပြောဦးပါမယ်. Spider Gwen (Gwen Stacy)ကိုလည်း Ghost Spiderလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်.
ဖြစ်တည်မှုတွေဆန်းဆန်းပြားပြားနဲ့ နောက်ထပ်characterတစ်ယောက်အကြောင်းပါ.Cosmic Ghost Riderလို့အမည်ရပါတယ်.ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်ကGhost Riderဖြစ်မလာခင်က Frank Castle (Punisher)ဖြစ်ပါတယ်.Earth TRN666ကဖြစ်ပါတယ်.
သူ့universeက Thanos versionဟာအလွန်ကြမ်းတမ်းပါတယ်.Thanosက ကမ္ဘာကိုinvadeလုပ်လာတဲ့အခါမှာ ရှိသမျှheroတွေအကုန်ကျရှုံးပြီး Punisherတစ်ယောက်သာကျန်ရှိခဲ့ပါတယ်.ဒါပေမဲ့Punisherလည်းအတော်ထိခိုက်ခဲ့ပြီး သေမလိုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်.ဒီအချိန်မှာပဲPunisherက ဘာတွေပဲပေးဆပ်ရဆပ်ရ Thanosကိုပြန်လက်စားချေချင်တယ်.ဒီအတိုင်းမသေဆုံးသွားချင်ဘူးဆိုပြီး universeကိုတိုင်တည်ခဲ့ပါတယ်.အဲ့မှာပဲ Mephistoကြီးကအရာရာပေးဆပ်မှာလားဆိုပြီး အပေးအယူတွေလုပ်ခဲ့ကြပြီး Punisherကို Ghost Riderအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်.
Thanosကြီးကတော့ သူ့questပြီးသွားလို့ပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်.Punisherက Ghost Riderဖြစ်လာတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့taskတွေကအရင် စတင်ဖို့လုပ်ဆောင်ရပါတယ်.ဒါပေမဲ့ ဒီကမ္ဘာအတွက် Ghost Rider(Punisher)ကအဓိပ္ပာယ်မဲ့တဲ့အရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်.ဘာကြောင့်ဆို သူ့အတွက်punishလုပ်ဖို့avengeလုပ်ဖို့ ရာဇ၀တ်သား,သက်ရှိဆိုလို့ဘာမှကိုမရှိတော့လို့ပါ.Thanosကအကုန်သတ်သွားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်.ဒါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးပေါ်မှာ Ghost Rider(Punisher)တစ်ယောက်ထဲ နှစ်ပေါင်းထောင်သောင်းချီအောင်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်.
တစ်နေ့မှာတော့ Dead Planetဖြစ်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးစီကို Galactusရောက်ချလာပါတယ်.သူရောက်ချလာတာကလည်း စားစရာဘာဂြိုလ်မှမတွေ့တော့လို့ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုအပြည့်နဲ့ပါ.ကမ္ဘာကလည်းပျက်စီးပြီးသားပေမဲ့ဘာတွေများရှိဦးမလဲလာကြည့်တဲ့ပုံပါပဲ.အဲ့မှာပဲ Ghost Rider (Frank Castle)နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်.Galactusကလည်း ကမ္ဘာဟာThanosကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တာကိုသိလိုက်ရပါတယ်.
Thanosကိုလက်စားချေဖို့ Galactusနဲ့Ghost Rider(Punisher)တို့ပေါင်းစည်းခဲ့ကြပါတယ်.နှစ်ယောက်သားအပေးအယူတွေရှိခဲ့ပါတယ်. Ghost Rider(Punisher)ကသူ့ကို cosmic powerတွေပေးပြီး Heraldတစ်ယောက်ဖြစ်ခွင့်ပေးပါပေါ့ အဲ့အတွက်ကြောင့်အလဲအလှယ်အနေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုစားလိုက်ပါပေါ့.အပေးအယူမျှခဲ့ကြပြီး Ghost Rider (Punisher)မှ Cosmic Powerတွေရလာပြီး Cosmic Ghost Riderဆိုပြီး ပေါ်ထွက်လာခဲ့တော့တာဖြစိပါတယ်.
နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကတော့ Galactusနဲ့ Cosmic Ghost Riderတို့ Thanosကိုသတ်ဖို့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်.ဒါပေမဲ့battleကမရှုမလှနဲ့ Galactusတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်.အချိန်ကာလအရမ်းကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သလို စွမ်းအားတွေလည်းကြီးမားနေပြီဖြစ်တဲ့King Thanosဖြစ်နေပြီမို့ အလွယ်တကူသတ်နိုင်ခဲ့တာပါ. Cosmic Ghost Riderက သူ့သခင်Galactusလည်းရှောနဲ့ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ပဲ King Thanosထံမှာပဲ Black Right Hand Guardတစ်ယောက်အနေနဲ့သာ အခစားဝင်လိုက်ပါတော့တယ်.လက်စားချေမဲ့planကနေ Cosmic Ghost Riderဖြစ် King Thanosရဲ့လူရုံဖြစ်နဲ့ … Cosmic Ghost Riderအကြောင်းလည်းဒီလောက်ပါပဲဗျာ
Marvel universeကို မြေလှန်ကြမယ့် Master of Evil team
တစ်ခေတ်တစ်ခါက Secret Warဆိုတဲ့comic eventဟာ multiverse crossoverပေါင်းစုံနဲ့ Marvel universeကိုကြီးကြယ်ခမ်းနားစေခဲ့ပါတယ်.Secret Warဟာလည်း MCUအတွက်Hitဖြစ်နေပါတယ်.Comicအတွင်းမှာဆိုရင်လည်း Secret Warကဲ့သို့ကြီးကြယ်ခမ်းနားမဲ့eventအသစ်တွေ setupလုပ်နေတာမျိုးကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်.ဒီလိုအရာတွေကိုဖြစ်လာစေတော့မဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ Master of evilဆိုတဲ့ teamကြောင့်ပါ.Marvelရဲ့Multiverseတွေအကုန်လုံးကိုရစရာမရှိအောင်ကိုပျက်စီးမှုတွေခေါ်ဆောင်လာကြတော့မှာပါ.Master of evil teamအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်.
Master of evil teamမှာပါဝင်သူတွေကတော့
– Doom Above All (Doom Supreme)
– Black Skrull
– Young Thanos
– King Killmonger
– Ghost Goblinတို့ပါ.
Mesphitoနဲ့Doomတို့ကဦးဆောင်ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ.Young Thanosကလွဲရင် ကျန်တဲ့သူတွေကMultiverseကပါ.
Doom Above Allကတော့သူ့universeမှာSupremeဖြစ်ပြီးတော့ Dark Phoenixကတော့ နာမည်နဲ့အညီPhoenix forceရှိထားပြီး Lady Deathနဲ့ဆင်တူမှုရှိပါတယ်.သူuniverseကWolverine(Berserker)ကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပုံစံ Guardအနေဖြင့်ထားပါတယ်.
Black Skrullကတော့ Red Skrullကိုမှ Symbioteနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့Versionပါ.King Killmongerကတော့ သူ့universeမှာ Wakandaကိုကော Asgardကိုကောတက်သိမ်းပြီးပါပြီ.Destroyer Armorကို Vibraniumနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး Panther Armorပုံစံသစ်တစ်မျိုးအဖြစ်မြင်ရပါတယ်.
Ghost Goblin – သူကတော့ Green Goblinနဲ့ Ghost Riderတို့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့versionပါ.Ghost Riderဖြစ်လာခဲ့တဲ့Green Goblinပေါ့.ဒီကောင်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ သူ့ရဲ့Goblin mine/bombတွေက သာမာန်မဟုတ်ပဲ Ghost Riderဦးခေါင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်.Multiverseက Ghost Riderတွေကိုလိုက်သတ်ပြီး Ghost Riderဦးခေါင်းတွေဖြုတ်ယူပြီး Gobline bombအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်.
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Young Thanos, သူကတော့ Marvel main timeline Earth 616ပဲဖြစ်ပါတယ်.timetravelစက်တစ်မျိုးကိုတီထွင်ပြီးRobotစစ်တပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်.
Master of Evil teamကိုမိတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုတော့teamရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြပေးပါမယ်.Villainတွေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသာဖြစ်စေပြီး အဓိကက Earth Mightiest Heroesတွေ Avengersတွေကို အမြစ်ဖြုတ်ချင်တာပါ.ဒါကြောင့် modern age Avengersတွေမရှိခင်ကာလ ဟိုးနှစ်ပေါင်းထောင်သောင်းချီ အတိတ်ကာလထိကိုtime travelသွားပြီး ကမ္ဘာကိုစုတ်ပျက်သတ်အောင်ကိုသမပါတယ်.ရည်ရွယ်ချက်ထက်ကိုပိုပြီး လုပ်ဆောင်ကြတာပေါ့ဗျာ.အဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်တောင် ရပ်တန့်မသွားပဲ နောက်ထပ်Multiverseတစ်ခုကိုထပ်ကူး အဲ့universeရဲ့အတိတ်ကာလကိုထပ်ဒိုး အတိတ်မှာရှိတဲ့ကောင်တွေကိုသမနဲ့ အနာဂတ်တွေကိုပြောင်းလဲပြီး destructionတွေဖြစ်လာစေပါတယ်. Master of Evilအဖွဲ့ဟာ ဒီလိုမျိုး Multiverseတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုလိုက်ဖျက်စီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်.
နောက်ဆုံးMarvelရဲ့ main timeline Earth 616ကိုလည်းရောက်လာကြပြီး 100000 BCက Odinဦးဆောင်တဲ့ Avengersတစ်ဖွဲ့လုံးကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်.ကမ္ဘာပေါ်က ပထမဆုံးphoenix hostဖြစ်ခဲ့သူ Lady Phoenixဟာ Master of Evil teamကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတာဖြသ်ပါတယ်.Odinတစ်ယောက်ထဲသာလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်.အနာဂတ်ကာလtimelineပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိလာမှာပါ.ဒါဟာလက်ရှိMarvel comicအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်.Master of Evil teamအကြောင်းကဒီလောက်ပါပဲဗျ.
Galactusက Asgard cityထိရောက်ချလာပြီး Odinနဲ့ချခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်.အတော်ကြီးမားတဲ့battleတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.Battleကလည်း ကမ္ဘာမြေပေါ်ကနေစခဲ့ပါတယ်.ဘာကြောင့်ဆို Ragnarokကြောင့် Asgardကပျက်စီးပြီး ကမ္ဘာမြေပေါ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်.
Galactusနဲ့ရင်မဆိုင်မီ Dark Sentryကြောင့် Asgardက ကျေမွသွားခဲ့ပါသေးတယ်.ထိုအဖြစ်အပျက်တွေကြားမှပဲ Asgardရှိ World Treeကြီးကနေ Worldheartလို့ခေါ်တဲ့ Power Source Seedတစ်မျိုးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်.ဒီအရာကို Galactusက အာရုံခံမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
Worldheartဆိုတဲ့အရာဟာ စွမ်းအားအများအပြားကိုသိုလှောင်ထားတဲ့sourceတစ်ခုဖြစ်ပြီး Eternityကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. Worldheartရဲ့အစွမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီး universeတစ်ခုတောင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်. Odinရဲ့အဖေ Borဟာ ဒီWorldheartကိုအသုံးပြုပြီး Ten Realmsကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
Galactusသာဒီအရာကိုရခဲ့ရင် သူ့ရဲ့ဆာလောင်မှုကို နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာမြင့်အောင်ထိန်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.Silver Surferကိုအရင်စေလွှတ်ပြီး Odinထံမှတောင်းခံခဲ့ကြည့်ပေမဲ့ Odinကတော့သူတို့ရဲ့အထွတ်အမြတ်ထားရာအရာဖြစ်နေတဲ့အတွက် မပေးနိုင်ကြောင်းနဲ့ Thorနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး Silver Surferကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်.အဲ့မှာပဲတင်းမာမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်.Galactusကလည်း Worldheartကိုမရရအောင်ကိုယူချင်တဲ့အတွက် ကမ္ဘာပေါ်ကAsgard cityအထိကိုဆင်းချလာခဲ့ပါတယ်.
Ten Realmsရဲ့All fatherကြီး Odinနဲ့ Galactusတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကြီးစတင်ခဲ့ပါတယ်.သာမာန်Asgardianတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတော့Galactusကမဖြုံခဲ့ပါဘူး.Mystical powerတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့Odinကတော့Galactusကိုယှဥ်ချဖို့ Body sizeကိုပါကြီးလိုက်ပြီး Hand to Hand combatနဲ့ချခဲ့ကြပါတယ်.ဘာကြောင့်ဆို သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးသာ seriouslyချကြရင် powerတွေစင်ရင်းနဲ့ ကမ္ဘာပါစုတ်ပျက်သတ်သွားနိုင်လို့ပါ.ဒါကြောင့်နေရာကိုspaceထဲထိပြောင်းရွှေ့လိုက်ကြပါသေးတယ်.Hand to Handတင်မကပဲ နှစ်ယောက်သား mind controlလုပ်ရင်း တစ်ယောက်စိတ်ထဲတစ်ယောက် အကြောက်တရားတွေထည့်ပြီး ယှဥ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်.
နောက်ဆုံးbattleကဘယ်လိုအဆုံးသတ်သွားသလဲဆိုရင် Odinက Galactusကို အားနဲ့ခေါင်းတစ်ချက်တိုက်ပြီး မှောက်လဲသွားစေခဲ့ပါတယ်.ဒီbattleမှာOdinအသာရခဲ့ပါတယ်.ခေါင်ူတစ်ချက်သာတိုက်ပြီး Galactusကိုအမှောက်သိပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.ဒါပေမဲ့လည်း ဒီလုပ်ရပ်ကြောင့်Odinကိုယ်တိုင်ဟာလည်း မေ့မျောပြီးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်.ဆိုတော့ နှစ်ယောက်စလုံးအမှောက်ပါပဲ.Battleအပြီးမှာတော့ Galactusကဒီဖြစ်ရပ်ကိုလက်ခံခဲ့ပြီး လက်လျှော့ခဲ့ပါတော့တယ်. Odinနဲ့Galactusရဲ့ battleအကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ.
Galactus The Devourer Of Worldဆိုရင် မသိတဲ့သူမရှိပါဘူး.သူအသက်ဆက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ ဂြိုလ်တွေရဲ့ပါဝါတွေကိုစုပ်ယူစားသောက်နေရတဲ့ကောင်ကြီးပေါ့.တချို့ Galactusရဲ့Originကိုတော့မသိကြသေးတာတွေရှိနိုင်ဦးပါမယ်.
Galactusဆိုပြီး ဖြစ်မလာခင်က Galanလို့ခေါ်တဲ့ လူသားနဲ့ဆင်တူတဲ့alienတစ်ယောက်သာဖြစ်ပါတယ်.ယခုMarvel comicတွေrunနေတဲ့universeမတိုင်ခင် ယခင်universeမှာကထဲကရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့သူပါ.သူတို့ရဲ့universeကြီးပျက်စီးချိန်မှာ Metatronလို့ခေါ်တဲ့Cosmo Beingကြီးရဲ့ကယ်တင်မှုကိုခံခဲ့ရပြီး Galanနဲ့Metatron နှစ်ယောက်သားအသက်ဓာတ်စွမ်းအင်တွေပေါင်းစပ်ရင်းမှ Galactusဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့တာပါ.
Galanရဲ့universeက 6th cosmoပါ. 6th cosmoပျက်စီးပြီး ယခုAvengersတွေရှိနေတဲ့ 7th cosmoရဲ့ Big Bangအချိန်ကာလမှာ Galactusအဖြစ်ပြန်လည်မွေးဖွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
ယခုcosmoမှာ Galan – Galactusဆိုပြီးရှိနေသလို ယခင်cosmoတွေမှာလည်း Galactusနဲ့ဆင်တူ Devour of Worldတွေရှိခဲ့ပါတယ်. Galan-Galactusရဲ့ Home planetဟာလည်း သူတို့universeမှ Devourer of Worldကြောင့် အပျက်အစီးအဆုံးအရှုံးတွေရှိခဲ့ရပါတယ်.လက်ရှိuniverseမှာတော့ Galan-Galactusကိုယ်တိုင်က Devourerကြီးပြန်ဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာ.
Galan-Galactusရဲ့ universeမှ Devorerရဲ့အမည်က Omnimaxဖြစ်ပါတယ်. Omnimaxရဲ့ဖြစ်တည်မှုကလည်း Galactusအတိုင်းပါပဲ. သူရဲ့cosmoပျက်စီးပြီး Galan-Galactusရဲ့cosmoမှာ Devourerအဖြစ်ပြန်လည်မွေးဖွားလာခဲ့သူပါ. Galanရဲ့cosmoက 6th cosmoဖြစ်ပြီးတော့ သူလာခဲ့တာက 5th cosmoကပါ. သူရဲ့cosmoမှာ အမည်က Moridumဖြစ်ပြီးတော့ Sorcerer Supremeတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်.သူတို့cosmoကြီးအဆုံးသတ်တော့မှာကိုသိနေခဲ့တဲ့အတွက် Big Bangနဲ့အသစ်ဖြစ်လာမဲ့Galanရဲ့ 6th cosmoမှာ Devourer of worldအဖြစ်ပြန်လည်မွေးဖွားလာအောင်လုပ်ခဲ့တာပါ.Sorcerer Supremeတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်လည်း Devourerကြီး Omnimaxအဖြစ်အောင်မြင်စွာပြန်လည်မွေးဖွားနိုင်ခဲ့တာပါ.
ဒါဆိုOmnimaxလာခဲ့တဲ့ 5th cosmoမှာကော? ဆိုရင် အဖြေကyesပါ. Omnimaxလာခဲ့တဲ့ fifth cosmoမှာလည်း Devourer of worldတစ်ကောင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်.သေချာrevealမလုပ်ထားသေးတဲ့အတွက် ဒီအကြောင်းအရာကတော့အသစ်ထွက်မဲ့comicတွေကိုထပ်စောင့်ရပါဦးမယ်.
5th cosmoအပြင် 4th cosmoမှာကောပဲ ထပ်ရှိနေပါသေးတယ်.သူ့ရဲ့အမည်က What-Must-Be ဖြစ်ပါတယ်.နောက်ပိုင်းcosmoသစ်တွေရဲ့Devourerတွေထက်ပိုကြမ်းပါတယ်.
လက်ရှိmain timeline cosmoရဲ့ Galactus The Devourer Of Worldမတိုင်မီ ယခင်cosmoမှာကထဲကရှိခဲ့ကြတဲ့ ဂြိုလ်တွေရဲ့ပါဝါတွေစုပ်ယူစားသောက်ဖျက်စီးခဲ့ကြတဲ့ Devourerကြီးများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်. Cosmoများအကြောင်းကိုလည်းPageမှာတင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်.
4th cosmo : What-Must-Be
5th cosmo : Unknown
6th cosmo : Omnimax (Moridun)
7th cosmo : Galactus (Galan)
Shanghai ကို British တွေနဲ့အတူ တက်သိမ်းခဲ့တဲ့ Dormammu
1860ခုနှစ် British တွေဟာ Material tradingပိုင်းမှာ Chineseတွေနဲ့ကတောက်ကစဖြစ်ပြီးငြိခဲ့ကြပါတယ်.Britishတွေထဲမှာ Baron Harknessလို့ခေါ်တဲ့ Wizardတစ်ယောက်လည်းပါဝင်လေတယ်.ထိုစဥ်အခါကလည်းChinaမှာက Five Weaponsလို့ခေါ်တဲ့ Kinesisပိုင်းတွေenergyပိုင်းတွေတတ်ကျွမ်းတဲ့ Martial fighter teamကလည်းရှိနေလေတယ်. Shang Chiရဲ့ ဦးလေးတွေဖြစ်ကြတဲ့ Zheng Yiနဲ့ Zheng Zhuတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်
ဒါ့ကြောင့် Britishတွေဘက်က အင်အားချင်းမျှသလို အရေးနိမ့်လာခဲ့ရပါတယ်.ဒါကြောင့် British Wizard – Baron Harknessက Dark Dimension portalကိုဖွင့်ချလိုက်ပြီး Dormammuကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.Dormammuနဲ့အတူ Mindless oneခေါ်တဲ့ Dark Dimension Creature စစ်တပ်ကြီးပါ ပါလာခဲ့ပါတယ်. ဒါကြောင့် Shang Chiရဲ့ဦးလေး Zheng Zhuအပါအဝင် Five Weaponsတစ်ဖွဲ့လုံးလည်းလျှော CNတွေအရေးနိမ့်ခဲ့ကြပါတယ်.
Shang Chiရဲ့ နောက်ထပ်ဦးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Zheng Yiတစ်ယောက်သာရှင်သန်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်.Dormammuနဲ့Mindless Oneစစ်တပ်ကြီးကတော့ Shanghaiကိုဖျက်စီးခဲ့ကြပါတယ်.Battleကနောက်ဆက်တွဲဘာဆက်ဖြစ်ကြသလဲကိုမသိရသေးပါဘူး.issueအသစ်တွေစောင့်ရဦးမှာမို့ပါ.ဒီအကြောင်းအရာအတွက်ကလည်း ဒီလောက်ပါပဲခဗျ
ပထမဦးဆုံး Scarlet Witch မဟုတ်တဲ့ Wanda
Wanda Maximoffဟာ MCUမှာဆိုရင် Darkholdကိုပိုင်ဆိုင်ထားသလို Chaos Magicနဲ့အတူ Ruinတွေပါတတ်ကျွမ်းလာတဲ့ Scarlet Witchတစ်ယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်. Scarlet Witchလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Wandaကိုပဲပြေးမြင်မိမှာပါပဲ
Comicအရဆိုရင် Wandaဟာ Scarlet Witchဖြစ်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးလူသားမိန်းကလေးမဟုတ်ပါဘူး.Scarlet ဆိုတဲ့အမည်နာမကလည်း သူမရဲ့မျိုးရိုးကနေအဆင့်ဆင့်ဆင်းသက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.Wandaရဲ့မိဘမျိုးရိုးစဥ်ဆက်တစ်ခုလုံးလိုလိုဟာMagicianတွေဖြစ်ကြပါတယ်.Wandaရဲ့အမေကိုယ်တိုင်ဟာလည်း Magicပိုင်းတွေအတော်တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ပါတယ်. Wandaမတိုင်ခင်မှာ Scarlet Witchဖြစ်ခဲ့သူဟာ သူမအမေကိုယ်တိုင်ပါပဲ. Natalya Maximoffလို့အမည်ရပါတယ်.သူမတို့Scarletမျိုးရိုးရဲ့ Magic abilityတွေဟာ Witchcraftလို့ခေါ်တဲ့ Entityကြီးစီကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်.ဒါအပြင့်Scarletတွေဟာ သေဆုံးသွားရင်တောင် Astral formနဲ့ဆက်လက်အသက်ရှင်နေနိုင်တဲ့ eternal lifeကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်.
Wandaရဲ့အမေ Natalyaဟာလည်း သူမရဲ့အဖေ/Wandaရဲ့အဖိုး Scarlet Warlockထံမှတစ်ဆင့်အစွမ်းအစတွေလက်ခံရင်း Scarlet Witchဖြစ်လာခဲ့တာပါ. Scarlet Warlockမှ Natalya, NatalyaမှWanda အဆင့်ဆင့်ဆင်းသက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.Scarlet Warlockရှေ့ကသမိုင်းကြောင်းကိုတော့သေချာဖော်ပြထာခြင်းမရှိသေးပါဘူး.
မွေးဖွားစဥ်အချိန်အခါထဲက High Evolutionကြောင့်mutateတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာရယ် Darkholdပိုင်ရှင်Chthonရဲ့hostလုပ်ခြင်းကိုခံရတာရယ် Scarletမျိုးနွယ်ရဲ့Magicတွေကိုဆက်ခံထားတာကြောင့် လက်ရှိအချက်အလက်တွေအရ Scarletမျိုးရိုးထဲမှာတော့ Wandaကအစွမ်းအထက်ဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်
အဆုံးထိဖတ်ပေးခဲ့လို့ ကျေးဇူးပါ။ နောက်ထပ် Comic fact အသစ်တွေနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်။
Comic fact Marvel MCU
No Comments on The Multiverse Of Madness မှာ X-Men တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ရှိ မရှိ?
Doctor Strange: The Multiverse Of Madness trailer ထွက်ပြီးတဲ့နောက် Wanda ရဲ့ multiverse နဲ့ reality အပေါ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကို Dr. Strange တစ်ယောက်ဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားမလဲဆိုတာလူအများစိတ်ဝင်စားနေကြတာအသိပါပဲ။
ပိုအရေးကြီးတာက Marvel movies တွေရဲ့ထုံး‌စံအတိုင်းတစ်ကားနဲ့တစ်ကားအချိတ်အဆက်မိမိလက်တွဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်သွားမလဲဆိုတာပါ။ အစပိုင်းကို No Way Home နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးနောက်အဆုံးပိုင်းနဲ့ credit scene တွေမှာကော ဘယ်သူတွေကိုမြင်ရပါ့မလဲ?
Cameo တွေအတွက်သတင်းကတော့အတော်လေးထွက်နေပြီး Loki, Professor X, Agatha တို့ကတော့အတော်လေးပါဝင်နိုင်ချေမြင့်တဲ့ character တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အသိသာဆုံးအချက်ကတော့ Fox ရဲ့ X-Men တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပြီး mutant နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Quicksilver နဲ့ Wanda ကိုတော့ MCU မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီ။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုးအရင်ကကျွန်တော်ပြန်လည်ဝေမျှဘူးတဲ့ theory တစ်ခုကိုပြန်ပြီးသတိရလာတဲ့အတွက်ထပ်ပြီးဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
X-Men တွေကိုချိတ်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် Wanda နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်စပ်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Multiverse Of Madness ဟာ X-Men တွေကို MCU ထဲထည့်သွင်းဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲ။
MCU ဟာ detail အသေးစားတွေမှာကအစ Pixar လိုအမြဲဂရုတစိုက်ထားတတ်တဲ့အတွက် fan တွေရဲ့မျက်စိဒေါက်ထောက်ရှာဖွေမှုတွေကြား Wolverine နဲ့ Wanda ရဲ့ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
House Of M event မှာ Wanda ရဲ့ No more mutants ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့် reality တစ်ခုလုံးဇောက်ထိုးဖြစ်ခဲ့ကာ mutant တွေအကုန်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
Multiverse Of Madness မှာလည်း Wanda ဟာသူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအာရုံခံမိရာက multiverse ကိုပြောင်းပြန်လှန်တဲ့အခါ House Of M ထဲကလို Professor X ကများလာတားမလား?
ဒါ့အပြင် House of M event မှာ Wanda reality warp တာကြောင့် Logan တစ်ယောက်မှတ်ဉာဏ်ပြန်ရလာပြီးသူ့ရဲ့နာမည်အရင်းကိုမှတ်မိခဲ့တာပါ။
Live-action Logan ဟာလည်းအတိတ်မေ့နေသူဖြစ်ပေမယ့် Days Of The Future Past ထဲမှာဆိုရင် time travel လုပ်ပြီးပြီးချင်း 1973 မှာကောင်မလေးတစ်ယောက်ဘေးနိုးလာတာမှတ်မိကြဦးမှာပါ။
အဲ့ကောင်မလေးကသူ့ကို Logan လို့မခေါ်ဘဲနာမည်အရင်းဖြစ်တဲ့ James Howlett ကိုအဖျားဆွတ်ကာ Jimmy လို့ခေါ်ခဲ့တာပါ။ ဒါဆို Logan ကအဲ့ကောင်မလေးကိုသူ့နာမည်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး နာမည်အရင်းကိုမှတ်မိနေပြီဖြစ်ကာ ဒါဟာ Wanda နဲ့ Logan တွေ့ဆုံပြီးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း 2020 June လတုန်းက reddit မှာအတော်လေးရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့အချက်အလက်တွေအကုန်ပေါင်းကြည့်လိုက်ရင် Multiverse Of Madness မှာ X-Men တွေကိုမြင်ရဖို့အတော်လေး chance များနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
No Comments on Christmas Eve အတွက် ရုပ်ရှင် ၇ ကား
ဒီနေ့ညဆိုရင်ပဲ Christmas Eve ရောက်နေပြီပဲဖြစ်တယ်။ Holiday လည်းဖြစ်တဲ့ အပြင် အားလုံးလည်း ပျော်ရွှင်စရာ Christmas Eve လေးကို ဇာတ်ကားလေးတွေကြည့်ပြီး ကြိုဆိုလိုအောင် Christmas Eve မှာကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကား ၇ ကားကို ရွေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Christmas ဆိုတာ ဆောင်းရာသီရဲ့ အနှစ်သာရတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အပြင်ကလေးတွေဟာဆိုရင်လည်း Christmas မှာ Santa ပေးမယ့် လက်ဆောင်လေးတွေရတော့မှာဆိုပြီး ပျော်နေကြတဲ့ အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Christmas Eve ဆိုတာ Christian တွေသာမကပဲ ကမ္ဘာအနှံနှံက လူတွေအတွက် တကယ့်ကိုမိသားစု ဆုံစည်းဖို လတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုတွေလို ရုံးပိတ်ရက်များများ မရှိတဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆို 24 ရက်နေ့ည Christmas Eve မှာမိသားစုတွေလက်စုံ ညစာစားကြပြီးနောက်နေ့ Christmas ပွဲကို ဆင်နွဲကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ရွေးပေးလိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေကတော့ တကယ့် Christmas ရဲ့ အနှစ်သာရကို ပေါ်လွင်စေမယ့် ဇာတ်ကားတွေချည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁။ The Klaus (2019)
2019 မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒီ ရုပ်ရှင်ဟာဆိုရင် တကယ့်ကို ရင်ထဲ အသဲထဲ ထိသွားမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Animated Film တစ်ခုဖြစ်ပြီး CGI တွေကလည်း ပုံစံကွဲပြီးထူးခြားနေတဲ့အတွက် ထူးခြားတဲ့ ခံစားချက်ကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
❄️ Story line ❄️
Jesper ဆိုတဲ့ကောင်လေးက အကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့်ပဲ အရမ်းအေးတဲ့ အန္တာတိက စက်ဝန်းနားက မြိုလေးမှာ တာဝန်လာကျပါတယ်။ သူရဲ့တာဝန်က တစ်နှစ်အတွင်းမှာ စာပေါင်း ၆ ထောင်ကို တာဝန်ယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြိုထဲက လူတွေက နှစ်ဖွဲကွဲနေပြီး မတည့်ကြပါဘူး။ သူကလည်း Klaus ဆိုတဲ့ လူကြီးဆီသွားပြီး အကူအညီသွားတောင်းပါတော့တယ်။ သူတို နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ဒီမြိုလေးကို ဘယ်လိုစည်းလုံးအောင်ပြန်လုပ်ပေးမလဲ ဆိုတာကြည့်ရမှာပါ။
၂။ Angela’s Christmas and Angela’s Christmas Wish (2017&2020)
ဒီဇာတ်ကားလေးက မိနစ်အနည်းငယ်ပဲ ရှိပေမယ့်တကယ့်ကို အနှစ်သာရရှိတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကို ရွေးပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Animated Film ဖြစ်ပေမယ့် အရမ်းရသမြောက်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။
1910 ခုနှစ် အိုင်ယာလန်ကို အခြေတည်ထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးက ကလေးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Angela လေးရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အတွေးလေးကိုပုံဖော်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့သူမအမေနဲ့ Church ကိုသွားရင်း Baby Jesus အရုပ်လေးကိုတွေ့ပြီး Baby Jesus လေးအေးနေမှာစိုးလို အိမ်ကိုတိတ်တိတ်လေးယူလာတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမဘာလို ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကို ပုံဖော်ပြထားက ရသမြောက်လွန်းလို မျက်ရည်မခိုင်တဲ့ သူတွေအလွယ်တကူထိရှစေမယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
၃။ A Christmas Carol (2009)
ဒီဇာတ်ကားကတော့ တကယ့်ကိုဘယ် Christmas Eve ရောက်ရောက်မရိုးနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဆိုရင် Christmas Eve ရောက်တိုင်းဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ 2009 CGI တွေနဲ့တောင်တကယ်အသက်ဝင်အောင် လုပ်ထားတဲ့ Animated ဇာတ်ကားမိုလိုအားလုံးအတွက် Heart Touching ဖြစ်စေမယ့် ဇာတ်ကားအဖြစ်ရွေးပေးလိုက်ပါတယ်။
❄️story line ❄️
Ebenezer Scrooge ဆိုတဲ့အဘိုးကြီးက အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ကပ်စေးကုတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Christmas ဆိုတာကို အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးလို ခံယူထားပြီး Christmas ကိုလည်းအရမ်းမုန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Christmas Eve ညမှာဆုံးပါးသွားတဲ့သူ့သူငယ်ချင်းကလာလည်ပြီး သူ့လိုGhost မဖြစ်အောင်အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်တိုက်ဆိုသလိုပဲ နောက်ထပ် အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန် နဲ့ အနာဂတ်ဆိုတဲ့သရဲ၃ ယောက်ရောက်လာပြီး Ebenezer Scrooge ကို Christmas အပေါ်ထားတဲ့ စိတ်ထားကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။
၄။ How the Grinch Stole The Christmas (2000)
အသစ်ထွက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားထက်စာရင် ဒီဇာတ်ကားလေးကပိုပြီးနွေးထွေးတဲ့ ခံစားချက်ကိုပေးတယ်လို ခံစားရလို ဒီဇာတ်ကားကို ဒီ List ထဲထည့်ခဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
Grinch ဆိုတဲ့လူကြီးက အမြဲဒေါသတကြီးနေတတ်တဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။ သူက Whoville ကလူတွေကိုကြည့်မရတာကြောင့် မြိုအပြင်ကဂူထဲမှာပဲနေပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ မြိုထဲက Christmas ကျင်းပနေတဲ့ နေရာကို ဖျက်ဆီးဖိုရောက်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာပဲ အသက်၆ နှစ်အရွယ် Cindy ဆိုတဲ့ကလေးမလေးကြောင့် သူရဲ့ခံယူချက်တွေဘယ်လိုပြောင်းလဲ သွားမလည်းဆိုတာကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၅။ The Nightmare Before Christmas (1993)
ဒီဇာတ်ကားကတော့ တကယ့်ကို Classic Movie တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ 90s stop motion တွေထဲ ထိပ်တန်းက ဇာတ်ကားတစ်ကားလိုလည်းပြောလိုရပါတယိ။ Christmas ရော Halloween မှာရောကိုယ်အမြဲကြည့်ဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ကားဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။
Jack Skellington ဆိုတဲ့ Halloween မြိုရဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးက သူ့ရဲ့မြိုမှာနေရတာအရမ်းစိတ်ညစ်လာတဲ့အတွက် ခြေဦးတည့်ရာထွက်လာရင်းနဲ့ Christmasမြိုကိုရောက်တဲ့ တံခါးကနေ Christmas ရဲ့ ပျော်ရွင်စရာတွေကိုကြည့်ပြီး Christmas မြိုကို ခိုးယူဖိုကြံစည်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အကြံအစည်အထ မြောက်မမြောက်ကို ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၆။ Scrooged (1988)
ဒီဇာတ်ကားက Christmas Carol နဲ့ ဇာတ်ကျောခြင်းဆင်ပေမယ့်မတူညီတဲ့ ရသနဲ့ မင်းသားကြီး Bill Murray ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ 90s ဇာတ်ကားတွေက တကယ့်ကိုရွှေခေတ်က ကားတွေလိုပြောရလောက်အောင် ဇာတ်လမ်း ဆက်တင်အကုန်အရမ်းကောင်းပြီး ကြည့်လိုလည်းကောင်းပါတယ်။
Frank Cross ဆိုတဲ့ Television Executive တစ်ယောက်က တစ်ကိုယ်ကောင်းအရမ်းဆန် ကပ်စေးနည်းပြီး Christmas ကိုလည်းအလေးမထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ Christmas Eve ဖြစ်တဲ့ ၂၄ ရက်နေ့ညမှာပဲ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန် နဲ့ အနာဂတ်ဆိုတဲ့သရဲ၃ ယောက်ရောက်လာပြီး Frank ကိုပြောင်းလည်းအောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၇။ Home Alone (1990)
Home Alone ကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ Christmas Eve အတွက် Classic Movie တစ်ခုပါ။ နှစ်တိုင်းလည်း လူတော်တော်များများကဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ရတာနှစ်သက်ကြပါတယ်။ တကယ်လည်း Classic Movie လိုပြောရလောက်အောင် ဒီဇာတ်ကားကို ဘယ် Christmas Movie မှမမှီနိုင်သေးပါဘူး။ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်မရိုးနိုင်မယ့် Christmas Eve ဇာတ်ကားမိုလို List ထဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အသက် ၈ နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ ကလေးလေး Kelvin ကသူ့ရဲ့ မောင်နှမ ၅ ယောက်ထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူတိုမိသားစု ခရစ်စမတ်အတွက် ပြင်သစ်ကိုသွားတဲ့နေ့မှာပဲ မိသားစုများတဲ့ Kevin တို မိသားစုမှာ အကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့်ပဲ Kevin လေးကိုတစ်ယောက်ထဲ ချန်ခဲ့သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ ထိပ်တန်းသူခိုး ၂ယောက်ကလည်း Kevin တိုအိမ်မှာဘယ်သူမှ မရှိဘူးအထင်နဲ့ Christmas Eve ညမှာ လာပြီးဖောက်ထွင်းပါတော့တယ်။ Kevin လေးက သူ့ရဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုတားမလည်းဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Breakdown Marvel MCU
No Comments on Doctor Strange In The Multiverse of Madness Teaser Trailer Breakdown
No Way Home လိုပဲ Rumors တွေ Fan Theory တွေ အများကြီးနဲ့ hype ရမယ့် Doctor Strange In The Multiverse of Madness ရဲ့ Official Teaser ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ် ။ ဒီအတွက်ကြောင့် အသစ်ထွက်လာတဲ့ Teaser နဲ့ ပတ်သက်ပြီး easter eggs လေးတွေ reference တွေကို breakdown အဖြစ် တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Spoiler Alert ♦️
တကယ်လို No Way Home မကြည့်ရသေးဘူးဆို ဒီ breakdown ကို မဖတ်စေချင်ပါဘူး ။ Spoilers တွေ များစွာ ပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ ။
Don’t Cast That Spell
Trailer စစချင်းမှာပဲ background speech အနေနဲ့ No Way Home First Teaser ထဲက dialogue တွေကို ပြန်ကြားရပါတယ် ။ Peter ရဲ့ identity ကို ဖုံးဖိုအတွက် Dr.Strange က spell တစ်ခု cast ဖို လုပ်နေတာကို Wong က အဲ့ spell ဟာ တအားအန္တရာယ်များတာကြောင့် မလုပ်ဖို တားနေတဲ့ dialogue နဲ့ Doctor က Multiverse အကြောင်း Peter ကို ပြောပြနေတဲ့ dialogue တွေကို နောက်ခံအသံအနေနဲ့ ဒီ trailer မှာ အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထူးဆန်းတဲ့ အချက်က Wong နဲ့ Strange ကြားက spell မ cast ဖို ပြောနေတဲ့ dialogue ဟာ တကယ့် No Way Home ရုပ်ရှင်ထဲမှာ မပါဝင်လာခဲ့ပါဘူး ။ deleted scene တစ်ခုဖြစ်ဖိုများပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီ dialogue ကို ပြန်ထည့်ထားရသလဲဆိုတာ ကတော့ Strange ရဲ့ spell မှားယွင်းသွားမှုကလည်း Multiverse madness ဖြစ်မှုမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်နေလိုပါ ။ No Way Home အဆုံးသတ်မှာ Multiverse က villain တွေ ရောက်လာမှာကို တားဆီးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် Loki နဲ့ Wandavision ဖြစ်ရပ်တိုကြောင့် Multiverse အတွင်း တစ်ခုခု မှားယွင်းသွားပုံပါပဲ ။ No Way Home အဖြစ်အပျက်အပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးက Peter နဲ့ ပတ်သက်ခဲ့သမျှ အကြောင်း အရာတွေအားလုံးမေ့ပျောက်သွားတာကြောင့် Strange ကိုယ်တိုင်လည်း Multiverse ကို ဖွင့်ခဲ့မိတဲ့ Spell ကို cast ခဲ့မိကြောင်း မေ့သွားပါတယ်။
Strange ဟာ ပထမ movie မှာ Christine အပေါ် အတော်လေး ခက်ထန်ခဲ့ပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ သူ့ကို တန်ဖိုးထားပါတယ် ။ What If? Episode4မှာဆို Christine ကို Strange ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း တွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။ ဒီနာရီလေးဟာ Christine က Strange ကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ နာရီလေးဖြစ်ပြီး နာရီအနောက်မှာ “Time will tell how much I love you” လို ရေးထိုးထားပါတယ်။
2016 movie အရ Strange ဟာ သူ့ဆီမှာ ဘာငွေကြေးဥစ္စာမှ မရှိတော့ဘဲ မွဲသွားတာတောင် ဒီနာရီလေးကို သူအမြဲတမ်း ဝတ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Kamar Taj ကို သူလိုက်ရှာနေတုန်းလူမိုက်တွေ သူ့နာရီကို လုဖို ကြိုးစားရာမှာလည်း ဒီနာရီအတွက် သူ့အသက်ပါ ရင်းပြီး ကာကွယ်ခဲ့တာကိုလည်း မြင်ခဲ့ရမှာပါ။ Sorcerer Supreme ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ထိကို ဒီနာရီကို မချွတ်ခဲ့တဲ့ Strange ဟာ ဒီ trailer မှာတော့ နာရီကို ချွတ်ထားပါတယ် ။ ဘာလိုလဲတော့ သေချာမသိပါဘူး။
Trailer ရဲ့ နောက်တစ် scene မှာ Christine ရဲ့ wedding ကိုလည်း မြင်ရတော့ Strange တစ်ယောက် Christine ကိုမေ့ပြီး ရှေ့ဆက်သင့်ပြီလို တွေးနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ နာရီက အက်ကွဲကြောင်းတွေကတော့ သူ car accident ဖြစ်တုန်းက ကွဲထားတာတွေပါ ။ ဒီလို အက်ကွဲနေတဲ့ နာရီရဲ့ မှန်မှာ Strange ရဲ့ reflection ကို မြင်ရတာဟာ အချိန်စီးကြောင်းတွေ အက်ကွဲလာတာကို ရည်ညွန်းပါတယ်။
Infinity Stone6ခုရှိတဲ့ အနက် Strange ဟာ Time Stone ရဲ့ စောင့်ရှောက်သူဖြစ်ခဲ့ပြီး ပထမ movie မှာလည်း အချိန်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ concept တွေကို ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ Strange မှာ time stone လည်းမရှိတော့ပါဘူး ။ အက်ကွဲနေတဲ့ နာရီကတော့ Multiverse အတွင်းရှိ မတူညီတဲ့ timeline တွေ ရောယှက်ပျက်စီးလာတာကို ပြောချင်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Trailer ထဲက စကားသံတွေကို သေချာအာရုံစိုက်နားထောင်
ကြည့်ရင် အသံတွေထပ်နေတာကို သတိထားမိမှာပါ ။ ဒါကတော့ Multiverse ထဲက variant တွေရှိကြောင်းကို ပြချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Trailer ရဲ့ scene တစ်ခုမှာ Strange တစ်ယောက် တစ်နေရာကနေ ထွက်လာတာကို တွေ့ရပြီး သူ့ပတ်ပတ်လည်က Reality ကြီးကလည်း Dark Forces တွေနဲ့ ပျက်စီးယိုယွင်း နေပါတယ် ။ ဒီ scene ကို ကြည့်ရတာ What If? Episode4ကိုတောင် သွားသတိရစေမိပါတယ် ။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ What If? ထဲကလို တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြောင်းလဲမရနိုင်တဲ့ Absolute Point of Time ကို ပြင်ဆင်မိလိုက်ပုံပါပဲ ။ ဒီနေရာမှာ သတိထားစရာတစ်ခုက Strange ရောက်နေတဲ့ Reality က MCU ရဲ့ mainstream reality မဟုတ်ပါဘူး ။ တခြားပျက်စီးသွားတဲ့ Reality တစ်ခုကို ရောက်သွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို Multiverse ကြီးရဲ့ အန္တရာယ်နဲ့ ပတ်
သက်ပြီး အနာဂတ်ကို ကြိုမြင်မိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
အဲ့ scene ရဲ့ နောက်ခံအသံအနေနဲ့ Mordo ရဲ့ အသံကို ကြားရပြီး ‘ reality ကို ပျက်စီးစေမှုတွေအတွက် မင်းကတော့ ဘာအပြစ်မှ ပေးခံရမှာမဟုတ်ဘူး ‘ လို ပြောလိုက်ပါတယ် ။ ဒါဟာ Strange နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Mordo ပြောနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို တခြားတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ဒီနောက် Strange ရဲ့ အသံကို ထပ်ကြားလိုက်ရပြီး သူ ဒီအရာတွေကို ဖြစ်လာဖို မရည်ရွယ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် သူ့မှာ ရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ကြောင်း ပြောနေပါတယ် ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို သိထားတဲ့ Strange ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပါ ။ Rumors တွေအရ ဒီဇာတ်ကားမှာ Strange နဲ့ တခြား ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ variant တွေ အများကြီး ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Multiverse concept ကိုလည်း သေချာပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီတော့ အခုလို ပြောနေတာဟာ Trailer အဆုံးသတ်မှာပါတဲ့ Evil Strange ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ background voice နဲ့အတူ ပြသွားတဲ့ scene မှာ Strange ဟာ Sanctum Santorum ရဲ့ လှေကားထစ်တွေကို တက်နေတာတွေ့ရပြီး Sanctum ကြီးကလည်း မှောင်မိုက်ပြီး ကြောက်စရာကောင်းနေပါတယ် ။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကတော့ ဒါဟာ တခြား reality က Alternate Sanctum ဖြစ်ပြီး Evil Strange နေထိုင်နေတဲ့ Sanctum လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့နောက်တော့ ကျွန်တော်တိုရဲ့ Wanda လေးကို တစ်ဖျတ်
လောက် မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ် ။ ကြည့်ရတာတော့တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တိုက်ခိုက်နေပုံပါပဲ။ ဝတ်ဆင်ထားတာကတော့ သာမန်အဝတ်အစားသာဝတ်ဆင်ထားပြီး scarlet witch costume နဲ့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနောက် Trailer အလယ်လောက်မှာ Wanda ကို Scarlet Witch costume အပြည့်အစုံနဲ့ ထပ်မံတွေ့ရှိရပါတယ် ။ Wandavision တုန်း က costume နဲ့တော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး ။ အကျီလည်း လက်ပြတ်ကနေ လက်ရှည်ဖြစ်လာပြီး Crown နဲ့ Costume ရဲ့ pattern အချိူလည်း ပြောင်းလဲထားပါတယ် ။ Wanda ကို ကြည့်ရသလောက်တော့ အန္တရာယ်များတဲ့ Ritual တစ်ခုကို ပြုလုပ်နေဟန်ရှိပြီး သူ့လက်ထိပ်လေးတွေလည်း အနက်ရောင်ဖြစ်နေပါတယ် ။ Wandavision ထဲက Agatha ဟာလည်း သူ့ witch form မှာ လက်ထိပ်အမည်းရောင်တွေဖြစ်နေတာပါပဲ။ ဒီအတွက်ကြောင့် Wanda ဟာ darkhold ကို ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာနေတာ ဖြစ်ပြီး အခု ပြုလုပ်မယ့် Ritual ဟာလည်း Darkhold ထဲက ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
Strange ရဲ့ ရည်းစားဟောင်း Christine ကိုတော့ သတိုသမီး ဝတ်စုံနဲ့ Wedding တစ်ခုမှာ မြင်တွေ့ရပါတယ် ။ Strange ကတော့ သတိုသားမဟုတ်ပါဘူး ။ Blip ဖြစ်နေတဲ့ ငါးနှစ်အတွင်းမှာ Christine ဟာ အသက်ရှင်ကျန်တဲ့ လူဦးရေ တစ်ဝက်ထဲ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ချစ်ရမယ့်သူတစ်ယောက်ကို ရှာတွေ့ခဲ့တာ ဖြစ်နိင်ပါတယ် ။ ဒါဆို ပထမ movie တုန်းက Christine နဲ့ date နေတယ်ဆိုတဲ့ Dr.Nick West များလားဆိုတော့လည်း
မဟုတ်ပြန်ပါဘူး ။ Dr.West ကို Strange ဘေးမှာ ရပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ် ။ ဒါဆို Christine ဟာ ဘယ်သူနဲ့ လက်ထပ်သွားတာလဲဆိုတာတော့ တွေးစရာပါ ။ ဘယ်သူနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်ပါ Strange မျက်နှာကတော့ မကောင်းပါဘူး ။ သူချစ်ရတဲ့သူကို သူ့ရှေ့တင် တခြားတစ်ယောက်နဲ့ ကြည်နူးနေတာ
မြင်တွေ့ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံပါပဲ ။
ဒါပေမယ့် ဒီ Wedding ဟာ ပျက်မယ့် အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ် ။ Wedding လုပ်နေတုန်း Multiversal Chaos ဖြစ်ပြီး monster တွေ ရောက်လာမယ့်ပုံပါပဲ ။ Christine ဟာလည်း ဒီ movie မှာ အရေးပါမယ့် role တစ်ခုကနေ ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး No Way Home ထဲက MJ လို ဖြစ်လာမှာပါ ။
Trailer ရဲ့ scene တစ်ခုမှာလည်း Christine ကို hero suit တစ်ခုနဲ့အတူ Dr.Strange,America Chavez တိုနဲ့ Dimension တွေ ဖြတ်ကူးနေတာ တွေ့ရပါတယ်
Multiverse of Madness ကို ရိုက်ကူးမယ့် ဒါရိုက်တာဟာ Horror ရုပ်ရှင်တွေ အရိုက်များတဲ့ Sam Raimi ဖြစ်ပြီး MOM ဟာလည်း Horror genre နဲ့ လာမှာပါ ။ Trailer မှာတင် တော်တော် dark ဖြစ်ပြီး background tone တွေကအစ Creepy ဖြစ်တဲ့ ခံစားချက်ကို ရစေပါတယ်။
Trailer မှာ ရုတ်တရက်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ ကျီးကန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် အနောက်တိုင်း pagan witchcraft လောကမှာ Crows တွေ Ravens တွေကို မကောင်းတဲ့ နိမိတ်တစ်ခုလို ယူဆကြပြီး ဒါဟာ စုန်းတွေကို ရည်ညွန်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ကျီးကန်းတွေဟာ ဝိညာဥ်လောကနဲ့ လူ့လောက ကမ္ဘာနှစ်ခုကြား သွားလာ နေတဲ့ guide တွေလိုလည်း ယုံကြည်ကြပြီး အစွမ်းထက်တဲ့ Spell တွေ Ritual တွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ဒီငှက်တွေကို အသုံးပြုပါတယ် ။ ဒီတော့ ဒီငှက်တွေက ဘာကို tease သလဲဆိုရင် အစွမ်းကြီးတဲ့ စုန်းမတစ် ယောက်ကို tease တာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ သူကတော့ ဘယ်သူလဲဆိုတာ fan တွေအားလုံးလည်း သိလောက်မှာပါ။
ဒီနောက် main cast တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ms.America (America Chavez) ကို မြင်လိုက်ရပါတယ် ။ ပုံစံကတော့ လုံးဝ comic accurate ပါပဲ။
သူ့အကြောင်း တစ်ချက်ပြောရရင် သူက Utopian Parallel လိုခေါ်တဲ့ အချိန်နဲ့ အာကာသအပြင်ဖက်က pocket realm တစ်ခုထဲမှာ မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို realm ကြီးက အန္တရာယ်တွေ ပျက်စီးမှုတွေ ကြုံလာရတဲ့အချိန်မှာ သူ့အစွမ်းသုံးပြီး Marvel earth-616 ကို ထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။ ဒီနောက် Young Avengers တွေနဲ့ တွေ့ပြီး Young Avenger တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ အခု MCU ကလည်း phase4ရဲ့ show တွေ movie တွေတစ်ခုစီတိုင်းမှာ Young Avengers တွေကို ချပြနေပြီဆိုတော့ ဒီအဖွဲကိုလည်း မဝေးတော့တဲ့ MCU အနာဂတ်မှာ မြင်ရပါတော့မယ်။
America Chavez ရဲ့ ability ကို ပြောရရင် သူက သူ လက်သီးနဲ့ ထိုးလိုက်သမျှ နေရာတွေမှာ ကြယ်ပုံစံ portal တွေ ဖွင့်ပြီး Multiverse ကို ဖြတ်ကူးသွားလာနိုင်ပါတယ် ။ Trailer ထဲမှာလည်း သူ့ star portal တစ်ခုကို ပြသွားပါသေးတယ် ။ Leaked ထားတဲ့ plot အရတော့ Chavez ဟာ သူ့ realm မှာ အေးဆေးနေနေတုန်း ရုတ်တရက် multiversal chaos ဖြစ်ပြီး သူ့ realm ပျက်စီးသွားတာကြောင့် MCU reality ကို ထွက်ပြေးလာပြီး Strange တိုနဲ့
Wong in Trouble
Blip ကြောင့် Strange ပျောက်ကွယ်နေစဥ် မှော်ပညာဆိုင်ရာ အရေးကိစ္စတွေကို တာဝန်ယူဖိုအတွက် Strange အစား Sorcerer Supreme ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Wong ကတော့ ဒီရုပ်ရှင်မှာ အသက်ဘေးနဲ့ ကြုံရမယ့်ပုံပါပဲ ။ Wong ကို ကြည့်ရတာ အတော်လေး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားပြီး တစ်ခုခုကို တားဆီးနေပုံပေါ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော့် theory အရတော့ Wong ဟာ ဒီကားမှာ သေဆုံးပြီး Sorcerer Supreme mantle ဟာ Strange ဆီ ရောက်မယ့် ပုံစံပါပဲ။
Another Strange Variant
America Chavez ရဲ့ portal နဲ့အတူ Strange variant နောက်တစ်ကောင်ကိုလည်း မြင်လိုက်ရပါတယ် ။ ဆံပင်အရှည်နဲ့ပါပဲ ။ Marvel Legends Toys ကနေ ထုတ်ထားတဲ့ Defender Strange ဖြစ်မယ်လိုတော့ ယူဆရပါတယ် ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း တခြား reality က variant တစ်ယောက်ယောက်ပါပဲ ။ Portal ထဲက တစ်ခုခုက ဆွဲယူသွားသလို portal ထဲကို အသံနက်ကြီးနဲ့ အော်ပြီး ပါသွားတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက် Strange varient တစ်ယောက် အဖမ်းခံလိုက်ရတာ ဖြစ်မှာပါ။
Marvel Studios ဆိုပြီး စာတန်းထိုးတဲ့ နေရာမှာ ပြသွားတဲ့ animation က တော်တော်လှပါတယ် ။ Marvel ရဲ့ အရင် phase 1 and2ရုပ်ရှင်တွေတုန်းက အသုံးပြုခဲ့တဲ့ comic ပုံတွေနဲ့ Intro ရယ် phase3ကနေ ယခု phase4အထိ အသုံးပြု နေတဲ့ movie scenes တွေနဲ့ Intro ရယ် အရင်က Marvel နဲ့ In association လုပ်ထားခဲ့တဲ့ Fox တို Sony တိုရဲ့ intro ရယ် သုံးခုပေါင်းပြီး collide ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ ။ ဖြစ်သွားပုံကလည်း what if? ထဲက intro theme လို prism တစ်ခု ကွဲအက်သွားတဲ့ multiverse concept နဲ့ ဖန်တီးထားတာပါ။
ဒါဟာ ဘာကို ဆိုလိုချင်သလဲဆို Multiverse ကို ပြချင်တာဖြစ်ပြီး Fox တို Sony တိုက ထုတ်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေအားလုံးဟာ canon ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ ။ X-men,Fantastic Four,Netflix’s Marvel Characters အစရှိသဖြင့် ဇာတ်ကောင်တွေအားလုံးကို မကြာခင် မြင်တွေ့ရဖို potential တွေအများကြီး ရှိလာပါပြီ
Wanda ဆီ အကူအညီသွားတောင်းတဲ့ Strange
Strange ကတော့ ဒီလို ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတာကြောင့်
သူတစ်ယောက်ထဲ မနိုင်တော့လို Wanda ဆီ သွားအကူအညီ
တောင်းပါတော့တယ် ။ Wanda ကတော့ အဖြူရောင်သစ်တောအုပ်တစ်ခုထဲမှာ ရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ် ။ ဒီ သစ်ပင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် ဒီလို အဖြူရောင် သစ်ပင်တွေဟာ Spiritualism ပိုင်းအရ ကစဥ့်ကလျားဖြစ်စဥ်တွေနဲ့ ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖော်ဆောင်ပါတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရရင် Wanda ဟာ Strange မရောက်လာခင်အထိ သူ့ဟာသူ ကိုယ်ပိုင် ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရှာတွေ့ပြီး နေနေခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့် Strange ရဲ့ အကူအညီတောင်းတာကို ကူညီပေးရာကနေ Multiverse က သူ့ကလေးတွေကို အာရုံခံမိပြီး သောင်းကျန်းမယ်ထင်ပါတယ် ။ Trailer ထဲမှာ ဒီလိုပြနေလို Wanda ကို villain မဟုတ်ဘူးလို ပြောမရပါဘူး ။ Marvel က သိတဲ့အတိုင်း fan တွေကို ဂျင်းထည့်နေကျပါ ။ ဒီတော့ Evil Strange က main villain မဟုတ်နိုင်ဘဲ Wanda က villain ဖြစ်လာမယ်ထင်ပါတယ် ။
Strange,America Chavez နဲ့ Christine တိုဟာ တံခါးတစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်ရာကနေ အပျက်အစီးတွေနဲ့အတူ ထူးခြားတဲ့ နေရာကြီးတစ်ခုကို မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ် ။ ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုရှိပါတယ် ။ ပထမတစ်ခုက Strange တိုဟာ ပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ Realm တစ်ခုထဲ ရောက်သွားတာဖြစ်နိုင်သလို ဒါဟာ America Chavez လာခဲ့တဲ့ Utopian Realm လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ Nexus of All Realities ပါပဲ ။ ဒါဟာ Multiverse ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ ရှိနေသမျှ Realities တွေ Dimensions တွေအားလုံးနီးပါးကြားက gateway တစ်ခုဖြစ်ပြီး Dimension တွေအားလုံးနဲ့လည်း ချိတ်ဆက်ထားပါတယ် ။
Doctor Strange ပထမ ရုပ်ရှင်တုန်းက Strange ရဲ့ တွဲဖက်နဲ့ ဆရာဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Mordo ကို ပြန်မြင်ရပါတယ် ။ Mordo ဟာ Doctor Strange (2016) movie ရဲ့ credit scene အရ villain ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး sorcerer တွေကို လိုက်သုတ်သင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အခုတွေ့ရတဲ့ Mordo ကတော့ Strange ကို တောင်းပန်ကြောင်း ပြောနေပြီး သူ့လုပ်ရပ်တွေကို နားလည်ဖို ပြောနေပါတယ် ။ ဒါက variant Mordo လည်းဖြစ်နိုင်သလို main reality က Mordo လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
Mordo က villain သာဆိုပေမယ့် ပထမကားထဲက Ancient One ရဲ့ အတော်ဆုံးနဲ့ စည်းကမ်းအလိုက်နာဆုံး တပည့်တစ်ယောက်ပါ ။ သူလည်း လမ်းမှားကို ရောက်သွားခဲ့ပေမယ့် Multiverse madness ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စကြီးကိုတော့ မလိုလားဘူးထင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ Strange ဆီ ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ သူ အမှားတစ်ခုခုကို လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ ။ ဒါကြောင့် Strange ကို သူ့ plan မှာ ပူးပေါင်းဖို လာပြောတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ နောက် scene တစ်ခုမှာ Strange နဲ့ Mordo တို fight နေတာလည်း တွေ့ရတော့
Strange ဟာ Mordo ရဲ့ အကြံကို ငြင်းလိုက်တာကြောင့် fight ကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ သိုမဟုတ်လည်း Strange ဟာ တခြား reality က Mordo နဲ့ တွေ့ပြီး သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာကြောင့် battle ဖြစ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Mordo ရဲ့ uniform ကတော့ အရင်ကားထက်စာရင် comic accurate အတော်လေး ဖြစ်လာပါတယ် ။
အတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ Kamar Taj
Kamar Taj ကို မြူခိုးတွေ ဖုံးအုပ်သွားပြီး Wong တိုတွေလည်း ပေါက်ကွဲမှုတွေကြားထဲ အသားကုန် တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ် ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ဒီ scene ရဲ့ background ဟာ Wong ဒဏ်ရာရပြီး တစ်ခုခုကို အံ့သြစွာ ကြည့်နေတဲ့ scene ရဲ့ background နဲ့ အတူတူဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီတော့ Strange တို အုပ်စု Multiverse ကို ပတ်ကာ ခရီးထွက်နေတုန်း Kamar Taj အတိုက်ခံရပြီး Wong သေမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
Kamar Taj ကို တိုက်နေတဲ့ အခန်းမှာ Rintrah အမည်ရ minotaur ကြီးကိုလည်း တစ်ဖျတ်လောက် မြင်လိုက်ရပါတယ် ။ Rintrah ဟာ extradimensional being တစ်ကောင် ဖြစ်ပြီး လူဆိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ Strange ကိုလည်း mission တစ်ချိူမှာ ကူညီပေးခဲ့ဖူးပါတယ် ။ အခုကြည့်ရတာလည်း Rintrah ကို Strange က Kamar Taj ကို ကာကွယ်ဖို ဆင့်ခေါ်ထားခဲ့တာဖြစ်နိုင်သလို multiverse က ရောက်လာတဲ့ villain လည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် ။ MCU က ဘာလုပ်မလဲ ပြောမရပါဘူး။
Chaos Magic သုံးနေတဲ့ Strange
Multiverse of Madness ဟာ What If? Episode4နဲ့ အတော်ကို ဆင်ပါတယ် ။ What If? မှာလည်း Strange ဟာ Christine ကို ပြန်ခေါ်ဖို Chaos Magic ကို သုံးခဲ့ဖူးပါတယ် ။ Strange တို သုံးနေကျက Eldritch Magic ပါ ။
ဒီတော့ Strange Chaos Magic ထုတ်သုံးရတဲ့ အချက်နှစ်ချက် ရှိပါတယ် ။ ပထမတစ်ချက်က Chaos Magic အသုံးပြုတဲ့ Wanda ကို တိုက်ရာမှာ Eldritch Magic ပဲ သုံးနေရင် မနိုင်နိုင်မှန်းသိလို level တူသွားအောင် တန်းညှိလိုက်တဲ့ သဘောပါ ။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုကို ပြန်ပြင်ချင်လို Strange တစ်ယောက် Chaos Magic သုံးပြီး Reality ကို ပြောင်းလဲမယ့် ပုံပါ ။
What If? ထဲက နဂါးများ
ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း What If? နဲ့ တော်တော့်ကို တူပါတယ် ။ What If? တုန်းကလည်း Strange ကိုယ်ထဲကနေ နဂါးတွေကို ထုတ်ပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့သလို ဒီမှာလည်း အဲ့အကွက်ကို ပြန်သုံးထားပါတယ်။
No Way Home တုန်း က Ned နဲ့ MJ တို Sanctum ရောက်နေတုန်း Strange ရဲ့ ရေခဲသေတ္တာကို ဖွင့်လိုက်ရာမှာ အထဲမှာ alien တွေ monster တွေကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။ လူတစ်ယောက်ဟာ မှော်စွမ်းအားတအားကြီးလာရင် သာမန်အစားအစာတွေက အားအင်တွေမပေးစွမ်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်
monster တွေကို စားနေရတာပါ ။ ဒါကလည်း comic reference တစ်ခုပါပဲ။ ဒီအတွက်ကြောင့်လည်း Strange ဟာ သူ့ကိုယ်ထဲကနေ monster တွေကို ထုတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် ။
New York မြိုလယ်ခေါင်မှာ ရေဘဝဲပုံစံ Interdimensional monster ကြီးရောက်ချလာပြီး Strange နဲ့ America Chavez တို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရပါတယ် ။ ဒီကောင်ကြီးကို Shuma-Gorath လို ထင်ကြပေမယ့် မဟုတ်ပါဘူး။ Shuma က ဒီထပ် ပိုကြမ်းပြီး ပိုကြီးပါတယ်။ ဒီကောင်ကြီးဟာ Gargantos အမည်ရ sea monster ကြီးတစ်ကောင်ပါ ။ ကြည့်ရတာတော့ Wanda ရဲ့ darkhold ritual ကြောင့် ရောက်လာပုံရပါတယ်။
Comic ထဲမှာတော့ Gargantos ဟာ Namor ရဲ့ ရန်သူပါ ။ Endgame မှာထဲက easter egg ပါခဲ့တဲ့ Namor ကို Rumor တွေထွက်ထားတဲ့အတိုင်း ဒီဇာတ်ကားမှာ debut လုပ်သွားမလားကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ ။
Strange Supreme or Evil Variant?
ဒီ scene ကတော့ တကယ်ကြက်သီးထစရာကြီးပါ ။ What If? ထဲက Strange Supreme ပြန်လည်ပါဝင်လာတယ်လိုတော့ ပြောကြပါတယ် ။ ကျွန်တော်ကတော့ Strange Supreme လို မထင်ပါဘူး ။ Strange Supreme က လူကောင်းတစ်ယောက်ပါ ။ ဟိုးအပေါ်မှာ ရှင်းထားခဲ့တဲ့
အတိုင်း absolute point of time ကို တစ်ယောက်ယောက်က ချိူးဖောက်လိုက်မိတဲ့အတွက် Evil Doppelgänger တစ်ခု ကွဲထွက်သွားတယ်လိုပဲ ထင်ပါတယ် ။ ဒီဇာတ်ကားအတွင်း Strange ရဲ့ variant များစွာ မြင်တွေ့
ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါဟာ Evil Variant တစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်ပါ
သိုမဟုတ်လည်း ပါမယ်လို Rumors တွေထွက်နေတဲ့ Nightmare သိုမဟုတ် Mephisto လို Evil being တစ်ကောင်ကောင်က Strange ယောင်ဟန်ဆောင်ပြီး chaos တွေ ဖြစ်အောင် လိုက်မွှေနေတာပေါ့ဗျာ ။
စာအရှည်ကြီးကို အချိန်ပေးဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ် ။ နောက်လည်း ဒီလို Superhero တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ content တွေ breakdown တွေကို ဖတ်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ZEUS ကို follow လုပ်ထားဖို ပြောချင်ပါတယ် ။
ဒါဟာ Teaser သာရှိသေးတဲ့အတွက် ဇာတ်လမ်းကို ခန့်မှန်းဖို
တော့ တော်တော်ခက်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း teaser မှာတင် စိတ်ဝင်စားဖို တအားကောင်းနေပါပြီ ။ Multiverse of Madness ကတော့ No Way Home ထက်တောင် ပို hype ရမှာ အမှန်ပါပဲ ။
ကျွန်တော်တို No Way Home တုန်းက တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့
တန်းတူ ရုံမှာ ကြည့်ရှုခွင့်ကို ဆုံးရှုးခဲ့ရပါတယ် ။ နိုင်ငံခြားက တခြားသူတွေ တအား hype နေကြတဲ့အချိန် ကျွန်တော်တိုကတော့ အိမ်မှာပဲ ရုံခိုးရိုက်လေးကြည့်ပြီး ကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် Multiverse of Madness ကို ရုံမှာ ကြည့်ပြီး hype ချငိတယ်ဆိုရင်တော့ များများ click ပေးကြပါ ။ ကျွန်တော်တို page က click တွေ တင်သာမက တခြားသော click to donate page တွေအားလုံးကို click ပေးခြင်းဖြင့် support ပေးကြပါ ။ ကျွန်တော်တို နိုင်မှ ဖြစ်ပါမယ် ။
ဒီအတွက် အားလုံးလည်း ဒီတော်လှန်ရေးကြီးမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က ပါဝင်ကြပါ ။ Multiverse of Madness ကို ရုံမှာ မပြခင် အချိန်5လကျော်ရှိပါတယ် ။ ဒီအချိန်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို စိတ်ဓာတ်ကျမနေဘဲ အကောင်းဆုံးရှင်သန်ရှေ့ဆက်ပြီး ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကို အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးပေးမှ ရပါမယ် ။ တစ်နေ့တော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ Endgame ကြည့်ခဲ့ရတုန်းကလို ရုံထဲမှာ ပြန်ဆုံချင်ပါတယ် ။ ဒီကာလအတွင်း အားလုံးလည်း ဂရုစိုက်ကြပါ။
(Zeusmyanmar.com မှ Content များကို
Character Info Comic fact Marvel
Moon Knight အကြောင်း
No Comments on Moon Knight အကြောင်း
ရှေ့လထဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Disney+ day မှာ Moon Knight Series Teaser ကိုချပြခဲ့ပါတယ်။ Moon Knight ဟာ Disney+ ကနေ6ပိုင်းစာ mini series အနေနဲ့ 2022 အတွင်းလာမှာဖြစ်ပြီး release date အတိအကျကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
အခုမှာတော့ Moon Knight ရဲ့ Comic ထဲက အကြောင်းအရာတွေကို အပြည့်အစုံဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Moon Knight (Earth-616)
Moon Knight ကို Doug Moench နှင့် Don Perlin တို့ကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနှင့် werewolf by night#32(may,1975) ခုနှစ်တွင်ပွဲထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Moon Knight ကို တော်တော်များများက Marvel ရဲ့ Batman လို့ပြောကြပေမဲ့တကယ်တမ်းကျ ဘယ်နေရာမှမတူပါဘူး။ Marvel မှာ Batman Rip off Hero တွေအများအပြားရှိပေမဲ့ Moon Knightကတော့ Batman နဲ့မတူသလို Rip Off လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ physical appearanceအရလည်း တူညီမှုတွေမရှိပါဘူး။
ပြောရရင် batman နဲ့ဆန့်ကျင့်ဖက်တွေချည်း ဖန်တီးထားတဲ့ Knightတစ်ကောင်ပါပဲ။ Dare Devilကသာ Batman နှင့် တူသည့် sueprhero တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Moon Knight ကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာ‌လို့မဟုတ်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအောက်မှာဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Moon Knightရဲ့နာမည်အရင်းဟာ Marc Spectorဖြစ်ပါတယ်။
Marc Spector ရဲ့ Story ကို First Appearance မှာဖော်ပြတာမျိုးမဟုတ်ပဲ နောက်ပိုင်း comic တွေမှသာ flashback story ကို Reveled လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Marc Spectorရဲ့ငယ်ဘဝဘဝမှာ မိဘနှင့်ပက်သက်လို့ Traumaများစွာရှိပေမဲ့လည်း အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာ U.S စစ်တပ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်။U.S army ကိုမဝင်ခင်မှာလည်း Boxing တက်ထိုးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဂုဏ်ထူး ဘွဲ့ထူးတွေ ထူးချွန်စုတွေ များစွာရရှိခဲ့ပြီး mercenary soldier တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အီရတ်မှာ စစ်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ (၇)နှစ်ထမ်းဆောင်ပြီး တိုက်ပွဲများစွာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေ တိုက်ဖော်တိုက်ဖက်ဘော်ဒါတွေဆုံးရှုံးနေရတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့် Marineဘဝမှ နုတ်ထွက်ပြီး C.I.A အခြေပြုစခန်းများတွင် နယ်လှည့်ပြီးတော့ တာဝန်သစ်များထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်‌နေ့တွင် Missionတစ်ခုနှင့် Marc Spector , Raul Bushman (Marc Spector ကဲ့သို့ mercenary soldierတစ်ယောက်) ရယ် Peter Alraure ဆိုသည့် archeologist တစ်ဦးနှင့် သမီးဖြစ်သူ Marlene တို့ဟာEgypt Sudan ဒေသမြောက်ဖက်ကို ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။
C.I.A side missionအနေနှင့် ထွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဟောင်း tomb တစ်ခုကို သုသေတနလုပ်ဖို့အကြောင်းအရင်းခံပြီးလာကြတာပါ။မထင်မှတ်ထားပဲ Raul Bushmanရဲ့ Betrayed လုပ်မှုကြောင့် Peter Alraure ဟာ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Marc Spectorကိုလည်း သဲပြင်ပူပူထဲတွင်တစ်ယောက်တည်းပစ်ထားခဲ့ပတယ်။ Marc Spectorဟာ ‌အပူချိန်မြင့်တဲ့ သဲပူတွေကြောင့်ပဲ အကူညီမရခင်မှာ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
Peter Alraureရဲ့သမီးဖြစ်သူ Marlene နှင့် သူမ၏အဖွဲ့သားတွေဟာ Marc Spectorကို ဂူဟောင်းတစ်ခုထဲသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
Moon God Khonshu ရဲ့ရုပ်ထုအနီးအနားမှာချထားချိန်မှာ မထင်မှတ်ထားပဲ Marc Spector ဟာ တစ်ဖန်ပြန်လည်အသက်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။ တခြားသူတွေပါအံ့ဩသင့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
Marc Spectorဟာ အသက်ပြန်ရှင်လာချိန်မှာ သူ့ကို Khonshuမှ အသက်ပြန်သွင်းလာကြောင်းကို အရိပ်အမွက်ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။Marc Spectorဟာအသက်ပြန်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် Khonshu ခိုင်းစေသမျှ ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုအပေးအယူလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက်မှာတော့ Marc Spector ဟာ သူတို့ကို Betray လုပ်သွားတဲ့ Bushmanနောက်ကိုလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း Bushmanကိုမမိခဲ့ပဲ Bushman ရဲ့ နောက်လိုက်များကိုသာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Bushmanကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့အချိန်မှစပြီး Moon Knightဖြစ်လာပြီး ကိုယ်ပိုင်suit , weaponများ accessoriesများနှင့် အသုံးလိုသည့်အရာများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် Moon Knightဟာ Identity(၃)မျိုးထားပြီး crime case တွေ scoutingပြုလုပ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Marc Spector ဆိုတဲ့ Moon Knight , Steven Grant ဆိုတဲ့ financier ,ထို့နောက်Jake Lockley ဆိုတဲ့ Cab Driver ဆိုပြီး Persona သုံးမျိုးထားထားပါတယ်။ ground information တွေစုံစမ်းပြီး crime တွေကို စတင် စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲ Marc Spector ဟာ Moon Knightစတင်ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။
Moon Knight ပထမ‌ဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့သူ Werewolf By Night
Moon Knight ရဲ့ပထမဆုံးဆောင်ရွက်ရမဲ့ Mission မှာ ပထမဆုံးရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ သူကတော့ Darkhold ကြောင့် generationအလိုက် ကျိန်စာသင့်နေသူ werewolf by night (Jack Russell) ဖြစ်ပါတယ်။
Werewolf Cursedကြောင့် werewolf Abilitiyတွေပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပြီး werewolfပြောင်းချိန်မှာ အသိစိတ်ကင်းမဲ့ပြီး inner mind သာရှိတဲ့ monster တစ်‌ယောက်ပါ။
Moon Knight ကို Committee ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက werewolf by night ကိုဖမ်းဖို့ငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Committee ဆိုတာကတော့ Marvel ရဲ့ Secret Organizationတစ်ခုဖြစ်ပြီး businessesအကြီးအကဲတွေ ထိပ်သီးသူတစ်ချို့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Moon Knightဟာလည်း Committeeရဲ့စေခိုင်းမှုနှင့်အတူ werewolf by night ကိုသွားရောက်ရှာဖွေဖမ်းစီးပါတယ်။ Werewolf By Night ကိုဖမ်းမိမယ်ဆိုရင် US dollar 10,000 offer လုပ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
First Battleအနေနှင့်မလွယ်ခဲ့ပါဘူး။ werewolf by nightဟာလည်း moon Knightကညရောက်မှလာရောက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုစားတဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့ဖက်တွင်လည်း အင်အားရှိနေခဲ့ပါတယ်။
Moon Knightကလည်း‌ခေသူမဟုတ်တာကြောင့် werewolfတွေရဲ့ weakness အနေနှင့် armor မှာ silver မှာတပ်ဆင်ပြီး Werewolf By Nightကိုသမဖို့ silver cesti တွေ လက်မှာတပ်ဆင်ပြီးထိုးပြီးဖမ်းဆောင်သွားပါတယ်။
Werewolf By Nightကိုဖမ်းပြီးနောက်မှာပဲ Moon Knightဟာ Committeeရဲ့ ယုတ်မာတဲ့အကြံကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ Jack Russellကိုဖမ်းပြီးနောက်မှာ သူမရဲ့ညီမဖြစ်သူ Lissa Russellကိုပါ Werewolfအဖြစ်ပြောင်းပြီး သူတို့ရဲ့ living weaponအဖြစ်အသုံးချဖို့ပါပဲ။
Moon Knightဟာလည်းသိသိချင်းမှာပဲ Werewolf By Night ကိုလွှတ်ပေးပြီး Committeeကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့ Werewolf By Nightဟာလည်း Moon Knightအကူအညီနဲ့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီcomicဟာ Moon Knightကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ ပွဲထုတ်ခဲ့တဲ့ comic issue ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Werewolf By Night#32(may,1975)
Spider-Man နှင့်တွေ့ဆုံပြီး Team Up ခဲ့ခြင်း
The Spectacular Spider-man Comic (1976) issue#22 တွင် Moon Knightနှင့် Spider-Manတို့ပထမဆုံအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
Moon Knight ဟာလည်း New York မြို့ထဲတွင် gang တွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေခဲ့ပါတယ်။ထိုအချိန်တုန်းက Moon Knightကို လူမိုက်အဖွဲ့အစည်းတွေ underground gangတွေကလွဲပြီး superheroတော်တော်များများများမသိပါဘူး။ The Defenders (first defends team)တွင်ပါဝင်ပြီးHellcat , Hulk နှင့်အခြား sueprhero များကတော့သိရှိခဲ့ပါတယ်။ New York မှာရှိတဲ့ streetပေါ်မှာ လူဆိုးထိန်းနေတဲ့ heroတွေကတော့ Moon Knightကကိုသိပ်မသိကြပါဘူး။
Spidey လည်း Moon Knightကိုမသိတဲ့ hero တွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။အဲ့နောက်မှာ Moon Knight ဟာ Spidey လိုက်နေတဲ့ ဓားပြတွေနောက်ကိုသူပါလိုက်ရင်း သူတို့နှစ်ယောက် တွေ့ကြပါတယ်။
ဓားပြတစ်ယောက်ကို moon Knightကသေအောင်ထိုးနေတာပါ။အဲ့တာကို Spideyကလာတားတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ချကြပါတော့တယ်။ Spdieyက Moon Knightကိုတားနေပေမဲ့လည်း Moon Knightကတော့ ရေလည်ပြန်ကြိတ်တာပါ။
မထင်မှတ်ထားပဲ third personက battle ထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ spideyရဲ့ super villainဖြစ်တဲ့ Cycloneပဲဖြစ်ပါတယ်။
Cyclone ဟာ Spider-Manရဲ့ Super Villainတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Abilitiyအနေနှင့် လေကိုထိန်းချုပ်ပြီး မုန်တိုင်းငယ်များဖန်တီးပြီး တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။
Cyclone ဟာ Moon Knightနှင့် Spideyတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့နောက်မှာတော့ Moon Knightနှင့် Spideyတို့ဟာ တစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်လာပြီး Cyclone နောက်ကိုလိုက်ပါတော့တယ်။ Cycloneဟာလည်း Undergroundအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်နေတာပါ။
Moon Knightနှင့် Spidey တို့ဟာလည်းလိုက်လာပြီး ထိုအဖွဲ့ရော Cycloneကိုရော နှိမ်နင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
ဒါကတော့ Moon Knightနှင့် Spider-manတို့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးအနေနှင့် Team Up လုပ်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Moon Knight Vs Midnight Man
Midnight Man ရဲ့နာမည်အရင်းကတော့ Anton Mogart ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Midnight Man လို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းက ညလယ်ရောက်မှ လှုပ်ရှားတတ်သူမလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ညလယ်ရောက်မှဘာတွေလုပ်သလဲဆိုတော့ Jewel တွေကိုခိုးယူတာပါ။
ခိုးယူရတဲ့အကြောင်းအရင်းကလည်းငွေရေးကြေးရေးကြောင့်မဟုတ်ပဲ သူ့ရဲ့ collector တစ်ယောက်အနေနဲ့ Collectionထဲမှာထည့်တာပါ။
Midnight Man ဟာ ဒီလို ခိုးယူမှုတွေကြောင့် နာမည်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ Moon Knightဟာ midnight Man ကို စတင် trackingလုပ်ပါတော့တယ်။
မထင်မှတ်ထားပဲ party တစ်ခုမှာပဲ Anton Mogartနဲ့တွေ့ပြီး ဒီ party ကိုပစ်ပြီး ပိုပြီးမိုက်မဲ့ party ကိုလာဖို့ challengeလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်မှာ Moon Knightဟာလည်း Anton Mogartနေထိုင်တဲ့ New Jerseyကိုသွားခဲ့ပါတယ်။
Moon Knightရောက်ရောက်ချင်းမှာတင်ထောင်ချောက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ moon Knightက စိန်ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရင်းကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့ Midnight Manဟာ တကယ်လို့ မင်းကိုငါမရှင်းထားရင် မင်းကငါ့ကို တစ်ချိန်ချိန်မှာ သတ်မှာပဲဆိုပြီး ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
Midnight Man ဟာလည်း Martial Art Specialistဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Moon Knightတောင်သိပ်မနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Midnight Man မှ Moon Knightကိုသတ်တော့မည့်အချိန်မှာ moon Knight chapter ရဲ့ Girlfriend ဖြစ်သူ Marlene Alraure မှ Midnight Man ကိုသေနတ်နှင့်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Might Man ဟာ အဆောက်အဦးအပေါ်ထပ်မှပြုတ်ကျပြီး ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
Moon Knightဟာလည်း Midnight Man Collect ထားတဲ့ တန်ဖိုးကြီးအရာအကုန်လုံးကို ပြတိုက်မှာလှူပြီး Donated By Marc Spector ဆိုပြီးနာမည်တပ်လိုက်ပါတော့တယ်။
Midnight Man ဟာမသေပဲအသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ collectionအကုန်လုံးကို Moon Knightကအကုန်လှူ‌ပစ်တော့ Moon knightကိုရေလည်တင်းနေတာပါ။
အဲ့တာကြောင့် Moon Knightတန်ဖိုးထားတဲ့ Statue Of Khonshu ရုပ်ထုကြီးကိုခိုးယူပြီး Moon Knight နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖျက်စီးပြလိုက်ပါတယ်။
Khonshuရုပ်ကြီးပျက်စီးသွားတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ Moon Knightအဖို့အားအင်တွေလျော့သွားသလို အားနည်းလာသလိုတွေခံစားလာရပါတယ်။
Midnight Man ဟာ Moon Knightရဲ့ရန်သူတော်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Bushmanကို Prisonမှတစ်ဖန်ကယ်ထုတ်ပြီး Moon Knightကိုချခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ Moon Knight တို့တိုက်ပွဲဟာရှည်ကြာခဲ့ပေမဲ့လည်း ရေမြောင်းထဲမှာချကြတော့ ရေကြီးပြီးလူစုကွဲခဲ့ပါတယ်။ Moon Knight ဟာ Khonshuရဲ့ ရုပ်ထုကြီးခွဲခံထားရတာမြင်တော့ depression ဝင်ပြီး စိတ်ဝိုင်းဆိုင်ရာစတင်ပျက်စီးလာခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာ Moon Knightကိုလိုက်ရှာကြပေမဲ့မတွေ့ပဲတွင်းတစ်ခုထဲမှာ ကြောက်ရွံ‌စွာနေထိုင်နေတာကို အချိန်အတော်အတန်ကြာမှတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။
Moon Knightရဲ့ကောင်မလေးဖြစ်သူက တကယ့်ရုပ်ထုအစစ်ဟာရှိနေတုန်းဖြစ်ပြီး Midnight Man ခွဲလိုက်တာအတုဖြစ်ကြောင်းကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ Marc Spector ဟာတစ်ဖန်ပြန်လည် အားအင်တွေမွေးဖွားလာပြီး ပြန်လည်ပြီး hero ဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
Midnight Man ဟာ challengeတစ်ခုကိုသူမသေခင်မှာ Moon Knightကိုစိန်ခေါ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သတ်ဖြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့ပါ။ အကျိုးဆက်ကတော့ midnight Manသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
Midnight Manမရှိတဲ့နောက်မှာတော့ သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူ Jeffrey Wilde ဟာ သူ့အဖေမှာခဲ့သည့်အတိုင်း လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီး ဒုတိယ‌မြောက် midnight Man ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Moon Knight လိုပဲ crime fighting hero ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။Moon Knightနဲ့အတူလည်း Team Up များစွာလုပ်ပြီး လူဆိုးတွေကိုနှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။
Moon Knight Vs Shadow Knight
Shadow Knightကတော့ Moon Knight နဲ့ညီအကိုဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်အရင်းကတော့ Randall Spectorဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာလည်း Marc Spectorလိုပဲ Mercenary soldierတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ညီအကိုချင်းချင်းကို Betray လုပ်ခဲ့တာမလို့ Moon Knightနဲ့ လမ်းကွဲခဲ့ပါတယ်။
Hatchet-Man ဆိုတဲ့ Villainဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီး Villainတစ်ယောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက်မှာတော့ Cult Of Khonshuဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကိုဦးဆောင်ပြီး သူဟာလည်း Moon Knightလိုမျိုးပဲ Khonshu ဆီမှ စွမ်းအားများရရှိခဲ့ပါတယ်။
Shadow KnightကိုMoon Knightနှင့် Punisherတို့ Duo team up လုပ်ပြီး နှိမ်နင်းယူခဲ့ရပါတယ်။
PUNISHER ပင် အံ့ဩမှင်သက်ရလောက်အောင် madness နဲ့ Strengthဟာမြင့်လွန်းနေတဲ့ သူပါပဲ။
Moon Knight (Shadow Land) final issue မှာတော့ shadow Knightဟာ Moon Knightသတ်တာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။
Serpent God ကြီးများကိုနှိမ်နင်းခဲ့ခြင်း
Marc Spectorရဲ့ Adventureထဲမှာ Elder Godတွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
Conan:The Serpent War Comic တွင် Marc Spectorဟာ ဆိုးရွားတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုက အသိပေးနေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Khonshuဟာလည်း သူ့ရဲ့ Knightကိုကြုံတွေ့ရမဲ့အရာကိုပြင်ဆင်ထားဖို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
Set ဆိုတဲ့ Serpent God ကြီးနဲ့ Wyrm ဆိုတဲ့ Elder God တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲကြားကို Moon Knight ဟာရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
James Allisonဆိုတဲ့ သူဟာ အတိတ်ဘဝတွေနဲ့ အနာဂတ်ဘဝတွေကိုဆက်နွယ်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။သူဟာ Serpent God ကြီး Set နဲ့ သူ့ရဲ့ cult ကိုဖျက်စီးဖို့အတွက် Moon Knight ကို 21AD ကနေဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ Moon Knightဟာ Solomon Kane ဆိုတဲ့ hero တစ်ယောက်နဲ့အတူ englandကို 1584AD ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Moon Knight ဟာ Khonshuလမ်းညွှန်မှုနဲ့ James Allison ရဲ့ body ကိုမြှုပ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ထိုအချိန်မှာပဲ Set ရဲ့ Cult အဖွဲ့တွေက James Allison ရဲ့ body ကိုတူးယူနေတုန်းမှာ Moon Knightကို time travelစွမ်းအားတစ်ခုနဲ့ရောက်ရှိသွားခဲ့တာပါ။
Moon Knight တို့ဟာ Set ရဲ့ Cult တွေတခြားဆက်နွယ်နေတဲ့ အရာတွေကိုလိုက်လံနှိမ်နင်းနေတာပါ။ တစ်ဖက်မှာလည်း Dark Anges နှင့် Conan တို့ဟာလည်း Serpent God Set ရဲ့ Cult တွေကိုသတ်ဖြတ်နေရတာပါ။
Moon Knightဟာ Serpent God ကြီး ရဲ့ လည်ဆွဲကိုတပ်ဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့ soul ဟာ EgyptကိုConan နှင့်အတူရောက်ရှိပြီး Set နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Khonshuရဲ့စွမ်းအား‌တွေကြောင့် set ကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါနဲ့တင်မပြီးသေးပဲ Moon Knightနဲ့တခြားသူတွေဟာ Dark Dimensionက Elder God တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Wyrm ကိုထက်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။
တကယ်တော့ Wyrm ဟာ Main Targetဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ James Allisonက Set ကိုအရင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် plan ချလိုက်တာပါ။
Moon Knight ဟာ Moon God Khonshuဆီမှ silver power ကိုလက်ခံရရှိပြီး elder god Wyrm ကို အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။
Wyrm ကိုအနိုင်ယူပြီးနောက်မှာ Moon Knightနှင့် Conan တို့ဟာလည်း သူတို့ရဲ့ နေရာအမှန် ခုနှစ်အမှန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Moon Knight ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာ အရင်ကထက်မြင့်တဲ့စွမ်းအားသစ်‌တွေရှိ‌နေပါပြီ။
Moon Knights Vs Kang The Conquer
Kang The Conquer ကိုတော့လူတိုင်းရင်းနှီးနေကြလောက်ပါပြီ။ MCU ရဲ့ Loki Series တွင်လည်း Alternative Kang အဖြစ် He Who Remains အနေနဲ့ ပါဝင်ပြီး MCU ရဲ့ time bruch တွေဖြာထွက်အောင်ကြံစည်ခဲ့သူတစ်ယောက်‌ပေါ့။
Moon Knightနဲ့ Kang တို့ရဲ့တိုက်တွဲဟာ Avnegersတွေ Elder God တွေ powerful being တွေတောင်မပါပါဘူး။
ရာစုနှစ်အဆက်ဆက်က Moon God Khonshu ရဲ့အစွမ်းတွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ Moon Knightတွေနဲ့ Kang ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
Kang The Conquer ဟာသူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတိုင်းကို အချိန်ရဲ့တည်ရှိမှုကနေဖျောက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ time stream ကိုသူ့စိတ်တိုင်းကျတည်ဆောက်ဖို့လုပ်တာပါ။ avengersတွေရဲ့တည်ရှိမှုဟာလည်း အစအဆုံးအကုန်ပျောက်ဆုံးသွားပြီး လက်ရှိကာလမှာ Kang ဟာ Earth တစ်ခုလုံးကိုအုပ်စိုးပြီး လူတွေကိုသူ့ကိုကိုးကွယ်ခိုင်းပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် Kang ဟာ Moon God Khonshuရဲ့ Totmens တွေကိုပါလုယူဖို့လုပ်ပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီတိုင်းရဲ့စွမ်းအားတွေဟာ time and space ကို အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားကြီးမားတဲ့ item တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။Ankh ဆိုရင်အချိန်နဲ့ပက်သက်တဲ့ Limitless Knowledgeတွေပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ Kang ဟာ Egypt ရဲ့ 2500B.C. ကိုသွားပြီး Khonshuရဲ့ ဘု‌ရားကျောင်းကိုသွားရောက်တိုက်ခိုက်ပြီး Moon Priest စီမှာယူပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် Time Stream ရဲ့အပြင်ဖက်မှာ Khonshuနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Khonshuမှ Kang ကိုတွေ့ဆုံးပြီး သူ့အနေနဲ့ အချိန်ရဲ့အပြင်ဖက်ထိပါခရီးတွေသွားလာနိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ Moon Priest ရဲ့ Blade ကို totemsတွေကို ထိထားလို့ TimeStream ပေါ်ကို အစိတ်အပိုင်း3ခုကွဲထွက်သွားပါတယ်။ TimeStream ထဲကို တစ်ပိုင်းစီကျသွားလို့ ဘယ် timelineမှာလည်းဆိုတာသေချာမသိပါဘူး။ Khonshuကလည်း မင်းဘယ်ရောက်ရောက် ငါ့ရဲ့ Moon Knightတွေကမင်းရှေ့မှာရပ်နေလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ Kang အနေနဲ့ Totemsတွေကိုရှာဖို့ အသည်းအသန်ကြိုးစားပါတော့တယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့Silver Gluch,Utahကိုသွားရောက်ပြီး Totemsတစ်ပိုင်းကိုယူဖို့ Kang သွားဟာသွားခဲ့ပါတယ်။ခုနှစ်ကတော့1874ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို timelineမှာ Moon Knightဟာ Cow Boy Verisonဖြစ်ပြီး Gunslinger Moon Knight လို့ခေါ်ပါတယ်။
Kang Timelineတွေမွှေထားလို့ Marc Spector/Moon Knightဟာလည်း Khonshuရဲ့စေလွှတ်မှုနဲ့ ထို ခုနှစ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
Moon Knight ဟာလည်း လက်ရှိကာလမှာ Kang ကြီးစိုးနေတာကြောင့် အံ့ဩနေခဲ့ရပါတယ်။ ဘာလို့ဆို Kang ဟာ Herosတွေမရှိတဲ့ လောကကြီးကိုကြီးစိုးနေတာမလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ Moon Knightရဲ့တည်ရှိမှုကိုတော့ Kang ကိုမဖျောက်ခဲ့ပါဘူး။ Moon Knight ဟာလည်းကြောင်စီစီနဲ့ နေထိုင်နေရတာပါ။
Khonshuရဲ့စေလွှတ်မှုကြောင့် 1874ခုနှစ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ Totems အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်ယူဖို့ပါ။ Gunslinger Moon Knightကတော့ Kangရဲ့လက်ချက်နဲ့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Kang ဟာလည်းနောက်ထပ် AD တစ်ခုမှာ Totemsနောက်တစ်ပိုင်းရှာဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။
1945ခုနှစ်ကို KhonshuမှMoon Knight ကိုခေါ်သွားပြီး Totems နောက်တစ်ပိုင်းကိုထိန်းသိမ်းဖို့
ခေါ်သွားပါတယ်။ထိုခုနှစ်မှာ‌တော့ Germany နှင့် Americanစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ Totems ကို Germany ဖက်မှထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ထိုခုနှစ်မှာရှိတဲ့ Moon Knight ကတော့ Victorian Moon Knightလို့ခေါ်ပါတယ်။ Moon Knight နှစ်ယောက်‌တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး Kang The Conquer လာတဲ့အချိန်မှာပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Marc Spectorဟာ Totemsကို Kang ထက်အရင်ရပြီး timeline နောက်တစ်ခုကို Khonshuမှခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ခုနှစ်တိုင်းမှာ Kangရဲ့စစ်တပ်တွေရှိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Moon Knightဟာ
Rome -300BCE. မှ Gladiator Moon Knightနှင့်လည်းကောင်း
Outside Boston -1776ခုနှစ်မှ Union Moon Knightနှင့်လည်းကောင်း
Chicago-1925ခုနှစ်မှ Gangster Moon Knight နှင့်လည်းကောင်း
North Atlantic-1710ခုနှစ်မှ Pirate Moon Knight နှင့်လည်းကောင်း
The Ruins of new York-2134ခုနှစ် မှ Patriot Moon Knight နှင့်လည်းကောင်း တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့ Team Up ပြီး Totem တစ်ခုကို Kang ရဲ့ရန်ကနေကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ New York မှာ Moon Knightလည်း Kang ရဲ့ tech gun နဲ့ ချခံလိုက်ရပါတယ်။ Kang ဟာ Moon Knight ဆီမှ Totem တစ်ပိုင်းကိုယူပြီး Moon Knightနဲ့အတူ နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုယူဖို့ ရောက်ပါတော့တယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ နောက်ဆုံးအပိုင်းဟာ Mesopotamia မှာတည်ရှိနေပြီး ခုနှစ်ကတော့4000BCE. ဖြစ်ပါတယ်။
Totem နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာ 4000BCE. မှ female moon Knightတစ်ခုကထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ Marc Spectorပြောကြားချက်အရ သူမဟာ Moon Knightတွေထဲအစောဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Kang ဟာလည်းရောက်ရှိလာပြီး Totemsကိုလုယူပါတော့တယ်။ Moon Knight ဟာ Female Moon Knightဆီမှ Totemsကိုအသုံးပြုကာ ခုနှစ်အဆက်ဆက်မှာရှိတဲ့ Moon Knight တွေကိုခေါ်ပြီး kangကိုသမခိုင်းပါတော့တယ်။
သူခေါ်ယူလိုက်တဲ့ Moon Knightတွေကတော့
Viking Moon Knight
Union Moon Knight
Victorian Moon Knight
Pirate Moon Knightတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Moon Knightတွေအကုန်လုံးဟာ Kang ကိုဝိုင်းသမကြတာပါ။ Moon Knightကပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ဘယ်ကောင်က Avnegersတွေကိုလိုသေးလို့လဲဆိုပြီးပါပြောတာပါ။
အဲ့နောက်မှာ Moon Knightနှင့် Khonshuတို့ဟာ Totems အကုန်လုံးကိုပြန်လည်ရရှိပြီး ထိုTotem တွေရဲ့အစွမ်းကိုအသုံးချကာ Kang The Conquerကို Time ရဲ့အပြင်ဖက်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်။
ထို့နောက် Timelineကိုပြန်ပြင်ဖို့ အတွက် Moon Knightဟာလုပ်ပါတယ်။သူ့လက်ထဲမှာ Totemတွေရှိတဲ့အတွက် Timelineကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အလှပဆုံးဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Moon Knightဟာ သူ့စိတ်ကူးအတိုင်းမလုပ်ပဲ female Moon Knightကိုပဲ အလိုကျလုပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး Timelineဟာ နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
Moon Knightရော Khonshuရောသိနေတာက Kang ကိုကြာကြာမထိန်းထားနိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ။totems တွေကိုတော့ female moonကပဲဆက်လက်ထိန်းထားခဲ့ပါတယ်။
(Moon Knight Annual#1) 2016
Age Of Khonshu
Age Of Khonshu မှာတော့ Moon Knight နဲ့ Khonshuတို့ရဲ့ lvl ဟာအမြင့်‌ဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။
Khonshuဟာ Moon Knightကို Avnegersတစ်ချို့ရဲ့စွမ်းအားတွေစုပ်ယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ Moon Knightဟာလည်း သူ့နတ်ဘုရားခိုင်းရင်အကုန်လုပ်တဲ့သူဆိုတော့လည်း လုပ်ကြတာပေါ့။
အဓိကက Khonshuဟာ Hell King ကြီး Mephisto ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာ earth ရဲ့အဆုံးသတ်ဟာ Mephistoကလုပ်လိမ့်မယ်လို့ နမိတ်ရထားလို့ပါ။ဒီတော့ Moon Knight ကိုသူ့ရဲ့နမိတ်ကိုပြောပြီး Mephistoကိုတားဖို့အတွက် စွမ်းအားတွေ မလုံလောက်မှာစိုးလို့ power တွေကိုစုပ်ယူဖို့ အတွက် Moon Knightကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနှင့် Moon Knightဟာ Iron Fist ဆီမှ စွမ်းအားကိုစုပ်ယူဖို့ K’un-lun အထိသွားဖို့ Iron Fist နဲ့ချခဲ့ပါတယ်။ Fist Of Khonshuဆိုတဲ့ အတိုင်း Iron Fist လည်း Moon Knight ဆီမှာ ကျရှုံးပြီး စွမ်းအားတွေစုပ်ယူခံခဲ့ရပါတယ်။
ထို့နောက်မှာတော့ Doctor Strange ရဲ့ Greenwich Village ကို mummies တပ်ကြီးနှင့် Moon Wizard လို့ခေါ်တဲ့ Cult of Khonshu အဖွဲ့ဝင်များကိုခေါ်ဆောင်ပြီး Doctor Strange ကြီးဆီကပါ စွမ်းအားတွေစုပ်ယူလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒါတွေအပြင် Ghost Rider (Robbie Reyes) ဆီက Spirit of Vengeance စွမ်းအားနှင့် Hell Charger ကြီးကိုပါ ခိုးယူလိုက်ပါတော့တယ်။
Khonshuရဲ့စစ်တပ်ကြီးတည်မြဲစေဖို့အတွက် Moon Knightနဲ့ သူ့ရဲ့စစ်တပ်ဟာ Wakanda ကိုသွားရောက်ပြီး တိုက်ခိုက်ကာ Black Pantherကိုလည်းဖမ်းစီးခဲ့ပါတော့တယ်။
အဲ့နောက်မှာတော့ Marvel Universeရဲ့ Historyကိုပြောင်းလဲတဲ့ ဇာတ်လမ်းသစ်များထွက်ပေါ်လာပါပြီ။
Moon Knightဟာ လပေါ်ရှိနေချိန်မှာ Thor ဟာ Moon Knightကို ဖမ်းဆီးအနိုင်ယူဖို့ လာပါတော့တယ်။
Thor မှ Moon Knight ဆီကို Mjolnirနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်ချိန်မှာ Moon Knight ဟာ comic fan တွေ အံ့ဩမှင်သက်မဲ့အရာကို လုပ်ပြခဲ့ပါတော့တယ်။
Moon Knightဟာ Thor နဲ့ hammer ကို ထိန်းချုပ်ပြပြီး Thor ကိုပြန်ရိုက်ပြသွားတာပါပဲ။
ဘာကြောင့် Mjolnir ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သွားတာလဲဆိုတော့ Thor တို့ Asgardမှာ သုံးတဲ့ Uru metal ဆိုတာ earth-616 မတိုင်မှီ ပျက်စီးသွားတဲ့ Universe မှ Moon ရဲ့ rock တွေဖြစ်ပါတယ်။
ထို cosmos ပျက်စီးပြီး earth -616 စတင်ဖြစ်တည်လာတဲ့အခါမှာ ပျက်စီးသွားတဲ့ Universeရဲ့ လဟာလည်းပျက်စီး အစိတ်အပိုင်းများခွဲထွက်ပြီး ရောက်လာတဲ့အခါမှာ Uru Metal ဆိုပြီး အမာကျောဆုံး metal ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
လနတ်ဘုရား Khonshuရဲ့စွမ်းအားတွေကို ဆက်ခံထားတဲ့ Moon Knightအနေနဲ့ လနဲ့သက်‌ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
Uru ဟာလည်း Previous Universeက Moon Rock ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ Moon Knightဟာလည်း Thor ရဲ့ Mjolnirကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။worthy ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
Thor ကို‌ထို့နောက် ဂြိုလ်3ခုကြားညှပ်ပြီးထားခဲ့ပါတော့တယ်။
ထို့နောက်မှာ Moon Knightဟာ Las Vegasမှာ Mephistoနေထိုင်တဲ့Hotel Inferno ဆိုတဲ့အဆောက်အဦးစီသွားပြီး Mephistoကို သတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
Mephistoနဲ့ ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ Moon Knightဟာ Iron Fist ရဲ့အစွမ်းရော Doctor Strangeရဲ့ Cloak of levitationအစွမ်းတွေကိုသုံးပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုဒီ Mephistoကိုသတ်လိုက်ပေမဲ့လည်း နောက်ထပ်သော pandimensional alternative တွေဟာထပ်မံရောက်လာမယ်ဆိုတာသိနေတဲ့အတွက် Khonshuဟာ စစ်တပ်တွေပြင်ဆင် ပိရိမစ်အကြီးကြီးကိုဆောက်ပြီး ခံစစ်အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီးနေနေခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း Khonshuအတွက်စွမ်းအားတွေမလုံလောက်ဘူးလို့ပဲခံစားနေရတဲ့အခါမှာတော့ Moon Knightဟာ Star-Brand ဆီကစွမ်းအားတွေထပ်ပြီးယူဖို့အတွက်လုပ်ရပါတော့တယ်။
Moon Knightပါဝင်ခဲ့သော Team များ
ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင် Moon Knight က Avnegersတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ captain America, Hulkတို့နဲ့လည်းအတူတူ တိုက်ခိုက်ခဲ့သူပါ။
ထို့နောက်မှာ B-list Avengersအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ West Coast Avengers အဖွဲ့ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
Marvel Knights အဖွဲ့တွင်လည်း Daredevil , Shang-Chi , Black Widow တို့နှင့်လည်း အတူတူCrime များနှိမ်နင်းဖူးပါတယ်။
Heros for hire အဖွဲ့တွင်လည်း ပါတင်ပြီး missionများဆောင်ရွက်ဖူးပါတယ်။
Captain Americaဦး‌စီးတဲ့Secret Avengersအဖွဲ့တွင်လည်းပါဝင်ပြီး special Black ops အနေနှင့် ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ထို့နောက် Moon Knightဟာ သူပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တိုင်းမှာmisson တိုင်းကို အကောင်းဆုံး actionယူ‌ဆောင်ရွက်တာကြောင့် Moon Knightဟာ တခြား hero တွေရဲ့ respectပေးခြင်းကိုခံရသူပါပဲ။
(One Millions Year Ago)
Marc Spectorတို့မတိုင်ခင်လွန်ခဲ့သောနှစ်တစ်သန်း Earth ရဲ့အစ Stone Age မှာကတည်းက Moon God Khonshuကို ပထမဆုံး worshipလုပ်ပြီး စွမ်းအားရခဲ့တဲ့ Moon Knight တစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထိုသူဟာ ပထမဆုံး Moon Knightဖြစ်ပါတယ်။ Khonshuပထမဆုံးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ Moon Knightပါ။
Khonshuကို worship လုပ်တဲ့ Moon Knightနှင့် stone age မှ Khonshuရဲ့ Cult တွေဟာ one million years ago က ပထမဆုံး Avnegersတွေနဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Odin , Lady Phoenix, Iron Fist, Ghost Rider, Black Panther, StarBrandတို့ ပါဝင်တဲ့ ပထမဆုံး Avengers Team ပါ။
ဒီ Moon Knightရဲ့ Story နှင့် detail ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ Living Statusကလည်း unknownဖြစ်နေပါတယ်။
Moon Knightစီမှာ။ Abilitiesများစွာရှိပါတယ်။
Moon God Khonshuဆီက Moon Power တွေရရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Moon Power တွေကို ယူနိုင်ပါတယ်။
Boxingသမားဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးလို့ Martial Art ပိုင်းမှာ ဆရာကျပါတယ်။
Marine တစ်ယောက် Mercenary Soldierတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် Fightingပိုင်းမှာတော့ captain America, Black Panther, Task Master တို့ကိုပါယှဉ်ချပြီး အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။
Medal တွေအများကြီးရရှိထားတဲ့စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် weapon တိုင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာကိုင်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Marksman Skill , Shooting Skill များဟာလည်း ကောင်းမွန်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ လက်နက်ပုံးတွေ သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းအထာကျပါတယ်။
Moon Empowermentဆိုတဲ့အတိုင်းလဆီကစွမ်းအားတွေကိုစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Avengersတွေကိုတိုက်ခိုက်တုန်းကလည်းအဲ့အစွမ်းတွေနဲ့ချခဲ့တာပါ။
Power Absorbingပြုလုပ်နိုင်ပြီး Doctor Strange, Iron Fist, Ghost Rider တို့ရဲ့စွမ်းအား‌တွေကိုစုပ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Lunar Strengthကိုရရှိထားတဲ့သူဖြစ်လို့ Moon Knight ဟာ ညရောက်ရင်ပိုပြီး သန်စွမ်းပါတယ်။ ညရောက်ရင် Moon Knightရဲ့အစွမ်းတွေဟာ နှစ်ဆ သုံးဆ ပိုမိုတိုးလာပါတယ်။
ညရောက်လျှင် Pain Resistanceပိုမိုမြင့်ပြီး ဒဏ်ရာတွေကိုများစွာအနာခံနိုင်ပါတယ်။
Moon Knightဟာ Hand to hand combatတွေ weaponတွေအပြင် Deactivate ပိုင်းရော Vehicleပိုင်းရောကျွမ်းကျင်ပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ Deactivate Skill နဲ့ Cult အဖွဲ့တွေ gang တွေအများအပြားနှိမ်နင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
Special Abilities တွေအနေနဲ့ Moon Knightဟာ age of Khonshuမှာ Necromancy စွမ်းအားနဲ့ Mummiesစစ်တပ်ကြီးတွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ထို့နောက် Moon Knightဟာ စုပ်ယူထားတဲ့ power တွေရဲ့အသုံးချနည်းကိုပါတစ်ခါတည်းသိပြီး Doctor Strange ရဲ့ spell တွေ Ghost Rider ရဲ့ စွမ်းအားတွေကိုအသုံးချပြခဲ့ပါတယ်။
Phoenix Force ရရှိထားတဲ့ Moon Knightကတော့ အမြင့်ဆုံးစွမ်းအားအ‌ခြေအနေပါရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆို သူ့ရဲ့နတ်ဘုရားကိုပါပြန်လည်အနိုင်ယူပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Phoenix Forceရဲ့စွမ်းအားတွေအကုန်လုံးကို အသုံးပြုလို့ရနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ Moon Knight ဟာ တော်တော်ကြမ်းတဲ့ hero တစ်ယောက်ပါ။ လျှော့တွက်လို့လုံးဝမရပါဘူး။
Marc Spector/ Moon Knightနဲ့ သူ့ရဲ့ main story တွေကို ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ Moon Knightအကြောင်းကို ဒီလောက်ဆို တော်တော်သိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Marc Spectorဟာ သာမန်လူဆိုးထိန်းထက်အများကြီးပိုတဲ့ hero တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လည်းကြမ်းတဲ့ hero တစ်ယောက်ပါ။ သိပ်မကြာခင် short fact လေးနဲ့ detail တစ်ချို့ကိုထပ်တင်ပေးပါမယ်။
Thanks for reading guys ..
(Zeusmyanmar မှ Content များကို ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြခွင့် မပြုပါခင်ဗျာ။)
Comic fact Explain Marvel MCU
Shang-Chi မှ Comic နှင့်ကွဲပြားချက်တစ်ချို့နှင့်Detailများ
No Comments on Shang-Chi မှ Comic နှင့်ကွဲပြားချက်တစ်ချို့နှင့်Detailများ
Warning 🚨 Shang-Chi 2021 flim ကြည့်ပြီးမှသာဆက်ဖတ်ကြပါ။
ဒီတစ်ခါတော့ Blu-Ray Leaked ဖြစ်ထားတဲ့ Shang-Chi Movie ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေ comic ထဲက detailတွေနဲ့မတူညီတာတွေရယ် Ester Eggs နဲ့ Detail တွေကို ဖော်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Ten Rings ရဲ့မူလအစ MCU vs Marvel Comics
Mandarinရဲ့ Ten Rings ကိုဇာတ်လမ်းစစချင်းမှာတင် Originပြောသွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။
Mandarin Rings တွေကို မီးတောင် သို့မဟုတ် ဂူတစ်ဂူထဲကနေရခဲ့ပြီး သူ့ကို ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်း‌ဆိုတာကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုပေါ့။
Comic ထဲမှာတော့ Mandarinဟာ ဒီလက်စွပ်ဆယ်ကွင်းကို valley of Spiritဆိုတဲ့ ဂူကြီးတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ alien space ship ထဲမှရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Space-Ship ထဲမှာ Axonn-Karr ဆိုတဲ့ alien ကိုသတ်ပြီး လက်စွပ်တွေကိုရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်စွပ်တွေကို Mukluan Rings လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလက်စွပ်တွေကို လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်းများစွာတုန်းကတည်ရှိခဲ့တဲ့ cosmic warrior တွေရဲ့ spirit တစ်ခုချင်းစီနဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Cosmic Energy တွေစီးဆင်းနေတဲ့ Space Rings တွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။
Xu Wenwu ရဲ့တည်ရှိမှုသက်တမ်း
Xu Wenwuဟာ Marvel ရဲ့ Functional Characterနှစ်ယောက်ကိုပေါင်းပြီးဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ကတော့ marvel comics ထဲမှ Shang-Chi ရဲ့အဖေဖြစ်သူ Fumanchu ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Ten Rings ပိုင်ရှင်ကြီး Mandarin ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Xu Wenwuရဲ့ Early Life ဟာ Fumanchu ကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ marvel comics ထဲမှာ Shang-Chiအဖေဖြစ်သူ Fumanchuဟာ ten rings ကိုတစ်ခါမှအသုံးမပြုဖူးပါဘူး။
Mandarinနှင့် သူ့ရဲ့သားကသာ အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
MCU mandarin verisonဖြစ်တဲ့ Xu Wenwu ဟာ ဒီ Character နှစ်ယောက်ရဲ့ story ကိုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ MCU Mandarinရဲ့တည်ရှိမှုသက်တမ်းကထောင်နဲ့ချီပြီဖြစ်ပြီး Ten Rings အဖွဲ့ရဲ့ကြီးစိုးမှုကလည်းတော်တော်ကိုကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Ta Lo Realm
Ta Lo Realm ကတော့ Shang-Chiအမေဖြစ်သူနေထိုင်တဲ့ Realm ဖြစ်ပါတယ်။
MCU တွင်လည်း Ta Lo ကို earth ကမဟုတ်ပဲ dimensionတစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။
Marvel Comic မှာလည်း Ta Lo Realm ဟာ Pocket Dimensionတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Toaist God (သို့မဟုတ်) တရုတ်နတ်ဘုရားတွေရဲ့ သုခဘုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Shang-Chi Movie ထဲကလို Mythical Creatures တွေ ဟာလည်း ထို Realm မှာတည်ရှိပါတယ်။ Shang-Chi Movieထဲတွင်လည်း တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
မီးတောက်နေတဲ့ Phoenix Like Creature ဖြစ်တဲ့ Fenghuang ငှက်မျိုးနွယ်များ၊Haetae /Shishi သို့မဟုတ် Guardian Lions လို့ခေါ်တဲ့ ကြီးမားတဲ့ lion like creatureတွေ Quilin Beast တွေ nine tale fox တည်ရှိပါတယ်။
Ta Lo Realmမှာ ဒီလို Creature တွေအပြင် God Power , Energy Source တွေရှိပြီး life-Force ပါရှိတဲ့ နတ်ဘုရားတွေရဲ့ ဘုံတစ်ခုပါပဲ။
Celestial Invasionကြောင့် Asgardianနတ်ဘုရားတွေ အကုန်နီးပါးသတ်ခံခဲ့ရချိန်မှာ Thor ဟာ Ta Lo ကို သွားပြီး Sky Father Yu Haung နတ်ဘုရားစီသွားရောက်ပြီး life energyကို‌သွားရောက်တောင်းဖူးခဲ့ပါတယ်။
MCU Ta Lo ကတော့ Ta Lo မျိုးနွယ်စုတွေနေထိုင်တာဖြစ်ပြီး earth နဲ့ dark dimensionကို ကာကွယ်ထားတဲ့ Dimensionတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိပါတယ်။
Shang-Chiရဲ့အမေဟာ MCU version သက်သက်ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကတော့ Ying Li ပဲဖြစ်ပြီး Ta-Lo Realm ရဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Comic ထဲတွင်မူ Shang-Chiရဲ့အမေဖြစ်သူကဟာJiang Li ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Comic ထဲမှ Shang-Chi ရဲ့အမေရဲ့ Storyဟာတော့ MCU နဲ့ဘာမှမဆိုင်တာပါ။ Ta Lo ကလည်းမဟုတ်သလို Earth ကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူမကို ယောကျာ်းဖြစ်သူ Fumanchu က marvel ရဲ့ ရန်အများဆုံး dimensionဖြစ်တဲ့ Negative Zoneကိုပို့ခဲ့တာပါ။
Shang-Chiရဲ့အမေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ Negative Zone မှာပိတ်မိခဲ့ပြီး Negative Zone မှာရှိတဲ့ အကောင်တွေရဲ့ရန်က‌နေအသက်ကိုရှင်အောင်မွေးပြီးနေခဲ့ရတာပါ။
ထို့နောက်သူမဟာ တခြား Dimensionတစ်ခုကနေလာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အတိအကျ‌တော့မသိရသေးပါဘူး။
ဒီတော့ MCU နဲ့ marvel comics ကတော့ အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးပါပဲ။
ဒါကတော့ Shang-Chiရဲ့အခန်းထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ Kung Fu Hustle Posterလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဟောင်ကောင်မင်းသားကြီး စတီဗင်ချောင်ရဲ့နာမည်ကြီး action/comedy ကားဖြစ်တဲ့ Kung Fu Hustle ကိုတော့လူတိုင်းကြည့်ဖူးကြမှာပါ။
Shang-Chi ရဲ့အခန်းထဲမှာတော့ Kung Fu Hustleရဲ့ Official Poster ကို‌ကပ်ထားတာတွေ့မြင်ရမှာပါ။
Fan Boi ..
Shang-Chiအခန်းထဲမှာကပ်ထားတဲ့ နောက်ထပ် Poster တစ်ခုကတော့ The Warriors ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့ Poster ပဲဖြစ်ပါတယ်။
The Warriors ဇာတ်ကားဟာ 1979ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့နာမည်ကြီး gang အဖွဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်ကားရဲ့ အောင်မြင်မှုအရှိန်နဲ့ Sony ရဲ့ Play Station2မှာလည်း video game ထွက်ရှိခဲ့ပြီး နာမည်ကြီးခဲ့ပါသေးတယ်။
Jackie Chan ရဲ့ Fight Sceneများနှင့်ဆင်တူနေခြင်း
Shang-Chi Director Destin Daniel Cretton ဟာ Shang-Chi Movie ရဲ့ action-packed တွေဟာ Jackie Chan Movie တွေကို inspired လုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုပြောကြားထားပြီးသားပါပဲ။
သေသေချာချာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ inspired လုပ်ထားတဲ့ ချကွက်ကတော့ လက်နက်အနေနဲ့ အဝတ်အစားကိုအသုံးချသွားတဲ့ Bus ပေါ်က ချခန်းပါပဲ။
ဒီချခန်းဟာ Jackie Chanရဲ့ Rumble in the Bronx ဇာတ်ကားထဲက momentတွေကိုယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုချတတ်အောင်လည်း Stunt Team ကို legendsတွေနဲ့အနီးကပ်အတူရှိပြီး experience ပြည့်ဝနေတဲ့ Andy Cheng နှင့် Brad Allan တို့ကိုခေါ်ယူသုံးပြီး Shang-Chiမင်းသားကို လပေါင်းများစွာ‌လေ့ကျင့်ပြီး ဂျက်ကီချမ်းရဲ့ ချကွက်တွေကို Inspiredယူခဲ့ပါတယ်။
Rush Hour2ကို အခြေခံထားတဲ့ Fight Scene
Andy Cheng နှင့် Brad Allan တို့ဟာလည်း Jackie Chan ရဲ့နာမည်ကြီး Action Movieတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rush Hour မှာ Stunt ပါခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ Shang-Chi မှာလည်း Stunt အနေနှင့် ပါဝင်Train ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်သည့်အလျှောက် Shang-Chiဇာတ်ကားတွင် Rush Hour2ထဲကလို တိုက်မှာကပ်ထားတဲ့တိုင်‌တွေပေါ်မှာချတဲ့ အခန်းကို inspiredလုပ်ထားပါတယ်။
ချခန်းတွေကို ပိုမိုအထာကျ လှပအောင် တစ်ဖန် Modifiedလုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။
တကယ် Jackie Chanနဲ့တွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ လူတွေဆိုတဲ့အတိုင်း Action ခန်းကိုအထာကျကျဖန်တီးနိုင်ကြပါတယ်။
Comic Accurateပိုဖြစ်လာတဲ့ Abomination
Incredible Hulk movie မှာပါပြီးကတည်းကပျောက်သွားတဲ့ Hulk ရဲ့ရန်သူတော်ကြီး Abominationကို Shang-Chi ထဲမှာထပ်မံ‌တွေ့မြင်ရပါတော့တယ်။ မကာအို ရဲ့ သတ်ပွဲထဲမှာ Wong နဲ့ကြိတ်နေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။
Abominationကြီးဟာ ပိုပြီး comic accurateဖြစ်လာတာကိုပါတွေ့မြင်ရပါတယ်။
နားရွက်တွေ body ဖွဲ့စည်းပုံတွေဟာ comic verisonနဲ့ဆင်တူဖြစ်လာပါတယ်။
Xu Wenwu ပြောတဲ့ ‘Master Khan’
Xu Wenwuဟာ ညစာစားတဲ့အခန်းမှာ သူ့ကိုနာမည်အမျိုးမျိုးခေါ်တဲ့အထဲမှာမှ ‘Master Khan’ လို့ပြောသွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။
Master Khan ဆိုတာ ဒီတိုင်းခေါ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
Marvel Comic ထဲမှာ Shang-Chiရဲ့အဖေ Fu Manchuဟာ legendary စစ်ဘုရင်ကြီး Genghis Khanရဲ့ Direct Bloodline ဖြစ်ပါတယ်။
Khan မျိုးနွယ်ဖြစ်တာကြောင့် Fumanchuကို Master Khan လို့ခေါ်ကြပါတယ်။
The most Dangerous Man on earth ဆိုတာလည်း သူ့ကိုပဲပြောတာပါ။
ဒါကြောင့် Shang-Chiဟာလည်း မွန်ဂိုစစ်ဘုရင်ကြီး Genghis Khanရဲ့ သွေးသားစစ်စစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Marvel Universeမှာတော့ စစ်ဘုရင်ကြီး Genghis Khanဟာ ထိုခေတ်က Iron Fist တစ်ကြောင့်လက်ချက်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
MCU ရဲ့ Mandarinဟာ လက်စွပ်တွေကြောင့်သာ mandarinဖြစ်နေပေမဲ့ ဇာတ်ကြောရိုးတစ်ခုလုံးက Fumanchuပါပဲ။
MCU မှာလည်း Master Khanကိုသုံးထားတဲ့အတွက် Genghis Khanရဲ့မျိုးဆက်အစစ်အမှန်ပဲလားဆိုတာပါပဲ။
Kung Fu Hustlee ထဲမှ Landlord
Kung Fu Hustleဇာတ်ကားထဲမှ Landlord Role ကိုသရုပ်ဆောင်တဲ့မင်းသားကြီး Yuen Wah ဟာလည်း Ta-Lo ရဲ့ ကာကွယ်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ပြနိလည်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ Master Guang Bo Role ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တည်လွန်းတော့ မှတ်တောင်မမှတ်မိဘူးအစက xD
Dweller-in-darkness And Soul-Eaters
Soul-Eaters Species တွေကိုတော့ Marvel Comics ထဲတွင် Sixth Dimension မှာတွေ့မြင်ရတဲ့ Creatures တွေပဲရှိပါတယ်။
MCU မှာတော့ Ta Lo ရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်းက Dark Dimensionမှာ နေတဲ့ အကောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Dweller-in-darkness ကတော့ mega soul eater ကြီးဖြစ်ပြီး Soul-Eaters တွေရဲ့ Leaderပါ။
Comic နဲ့ MCU ကွဲပြားချက်ကတော့ soul-eater တွေရဲ့ body ဖွဲ့စည်းပုံမတူပါဘူး။ Comic Soul-Eaters များဟာ Humanoid Speciesဖြစ်ပြီး Shang-Chi Movieမှာတော့ bird-like Creatures ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ Credit Scene လေးကိုတစ်ချက်ရှင်းကြည့်ပါမယ်။ Shang-Chiတို့စကားပြောနေချိန်မှာ Wong ကလာခေါ်ပြီး လက်စွပ်တွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
Captain Marvel , Brue Banner နှင့်အတူပေါ့။
သူတို့ပြောပုံအရရင်ဆိုရင် Ten Rings ရဲ့သက်တမ်းဟာ အတော်ကိုကြာနေပါပြီ။ ဒီ Galaxy မှာရှိတဲ့ Metal မျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဆို Tem Rings က ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲ? သူ့ သတင်းပေးနေတဲ့ သူကရောဘယ်သူဖြစ်မလဲ?
တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် Ten Rings ဟာ နောက်ထပ် Galaxy တစ်ခုက စစ်ဘုရင်တစ်ယောက်ပိုင်တဲ့ လက်စွပ်တွေပါ။ ထိုစစ်ဘုရင်ကြီးက လက်စွပ်တွေကို အသုံးချပြီး များစွာသော alien race တွေကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
သူကတော့ Makluans Overlordကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Makluans ဆိုတာကတော့ alien race တစ်ခုဖြစ်ပြီး space dragon တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Galaxyရဲ့ ကြမ်းတမ်းပြီး စွမ်းအားကြီးတဲ့နဂါးမျိုးနွယ်စုတွေပါ။
Marvel Comics ထဲမှာ Ten Rings ကို Makluans Rings လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Ten Rings ရဲ့ မူရင်း owner ဟာ Makluan မျိုးနွယ်ဝင် ဖြစ်လို့ပါပဲ။
MCU အနေနဲ့ Makluans Rings တွေကိုမတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ချပြထားပြီး လက်စွပ်တွေရဲ့စွမ်းအားကိုတောင်သေချာမပြသေးတာဖြစ်လို့ Ten Rings ကအချက်ပြနေတဲ့ သူကိုလည်း မတူညီတဲ့ ပုံစံနဲ့ချပြပါလိမ့်မယ်။
MCU ထဲမှာတည်ရှိပြီးသား Characterထဲကတစ်‌ယောက်လား MCU ထဲမှာ ထပ်မံပါဝင်မည့်သူလားဆိုတာ တွေးစရာပါပဲ။ လက်စွပ်ကအချက်ပြနေတာကရော ဘယ် Galaxy မှာတည်ရှိနေမလဲဆိုတာ မေးခွန်းတွေအများကြီးမေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။
အပေါ်မှာ ကျနော်ပြောခဲ့သလိုပဲ။လက်စွပ်တွေအချက်ပြနေတာက လက်စွပ်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်မဟုတ်ရင် နောက်ထပ် လက်စွပ်စွမ်းအားကို လုယူမဲ့ စစ်ဘုရင် မဟုတ် စွမ်းအားရှင်တစ်ယောက်လားဆိုတာပါပဲခင်ဗျာ။
အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးခဲ့ကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါကတော့ Shang-Chi and the legend of ten rings ရဲ့ MCU verison vs Comic Verison နှင့် detail အချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ZEUS follower များအနေနဲ့ ထပ်သိချင်မရှင်းတာတွေများရှိသေးရင် comment sectionမှာထပ်မံမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။